YEYINTNGE(CANADA): Sunday, March 03
လူမျိုးစုများကို ကာကွယ်ပေးထားသည့်အသေးစိတ် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှု မလုပ်ရသေး
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူမျိုးစုငယ်များနှင့် ဆွေးနွေးနေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၏ ရှင်းလင်း ပြောကြားချက်
မိမိတို့နိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု တစ်ရာကျော်ရှိပါကြောင်း၊ ၁၉၄၈ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ရေးမရမီက တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများကို တောင်ပေါ်နှင့် မြေပြန့်ခွဲ၍ သွေးခွဲပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်း အချင်းချင်း ယုံမှား သံသယတွေဖြစ်ပြီး လက်နက်စွဲကိုင်၍ အစိုးရကို တိုက်ခိုက်လာခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း၆ဝ ကျော်ကြာခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ကြာဆုံးသော ပဋိပက္ခ တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း၊
လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို ချုပ်ငြိမ်းရန်အတွက် အစိုးရအဆက်ဆက်က ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သည့် နေရာတွင် အောင်မြင်မှုများလည်း ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ တချို့လည်းမအောင်မြင်မှုများ ကျန်ရှိနေသည့်အတွက် မိမိတို့အစိုးရသစ် တက်လာသည့်အခါတွင် လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်သည့် လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ပေါင်း၁၁ဖွဲ့ ရှိပါကြောင်း၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ရှိနေသမျှ မိမိတို့၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုသည်မှာလည်း မည်သို့မျှအောင်မြင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ တိုင်းပြည်တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုမရှိပါက စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင်လုပ်ရန်ဆိုသည်မှာလည်း များစွာခက်ခဲမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီသည်လည်း ရှေ့သို့ဆက်ပြီး ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါကြောင်း၊
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းရန်အတွက် မိမိတို့အစိုးရတာဝန်ယူသည့်အခါ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကို ဦးစားပေးပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံတည်း အတူတကွ နေနေကြသည့် သူများဖြစ်ရာ အိမ်ထောင်စုတစ်စုတည်း အတွင်း အတူနေနေကြသည့် မိသားစု အချင်းချင်း မည်သည့်အတွက်ကြောင့် တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်နေမလဲ။ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းကို သင်ခန်းစာရယူသင့်ပါကြောင်း၊
သို့ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ကြရန်အတွက် ယင်းအဖွဲ့များကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါကြောင်း၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကြောင့် ပြည်သူများ၏ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ အခြားတစ်ဖက်က ဆုံးရှုံးမှုများ၊ အစိုးရဘက်မှ ဆုံးရှုံးမှုများ ယင်းဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးသည် တိုင်းပြည်၏ ဆုံးရှုံးမှုများပင် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆက်ပြီးအဆုံးရှုံးမခံကြဘဲ လက်တွဲပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်ကြရအောင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက် အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့ ရှိသည့်အနက် ၁၀ ဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းရရှိပြီး အပစ်အခတ်များ၊ တိုက်ခိုက်မှုများ ရပ်စဲသွားပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သာ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၌ ကျန်ရှိပါကြောင်း
ယင်းအဖွဲ့နှင့်လည်း မကြာခင်ကထိတွေ့ ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ လောလောဆယ်တွင် ယင်းနယ်မြေ၌လည်း ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ လုံးဝရပ်ဆိုင်းသလောက် နီးပါးရှိသွားပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊မကြာမီတွင် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးရန် ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် အစိုးရပိုင်း အနေဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ရပ်ဆိုင်းပြီး ဆွေးနွေးပွဲလုပ်နိုင်သည့် အဆင့်ရောက်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု အနေဖြင့် လွှတ်တော်ရှိပါကြောင်း၊ လွှတ်တော်တွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ပါပါကြောင်း၊ ပါတီပေါင်းစုံပါပါကြောင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရန်အတွက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများမှာ လွှတ်တော်တွင် ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးသွားကြမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လူမျိူးစုများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲရန်အတွက် မိမိတို့၏အခြေခံဥပဒေတွင် လူမျိုးစုများကို ကာကွယ်ပေးထားသည့် ဥပဒေများ ပါရှိပါကြောင်း၊ သို့သော်လည်းအသေးစိတ် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှု မလုပ်ရသေးပါကြောင်း၊
အသေးစိတ် ဥပဒေများ ပြန်ဆွဲပြီး ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် လူမျိုးစု အချင်းချင်း ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ရှေ့ကိုဆက်လုပ်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိပါကြောင်း။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/03/20130အကြံပြုခြင်း
Street View ဆိုတော့ street ပေါ်မှာပဲရေးပြီးထုတ်ဝေလိုက်ပုံက
နေပြည်တော်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရု မစိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဌာနက ဒု- ညွှန်မှူး ဦးမျိုးဝင်း
Than Hteik Zaw
၂-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ည ၁၀း၀၀ နာရီ လောက်က ဇမ္ဗူသီရိ၊ ဘောဂသိဒ္ဓိ ရပ်ကွက် ရှိ မြ၀တီ ဓါတ်ဆီ ဆိုင် အရှေ့မှာ ယာဉ်တိုက်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပွား ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ Van အဖြူရောင် ကားနံပါတ် ၆ခ/၁၂၀၀ ကို မောင်းနှင် လာတဲ့ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒု- ညွှန်မှူး ဦးမျိုးဝင်းဟာ အရက် အလွန် အကျွန် မူးနေပြီး၊ မတ်တတ်တောင် ကိုယ်တိုင် ကောင်းကောင်း မွန်မွန် မရပ် နိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိ နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ လမ်းသွား လမ်းလာ များက အမြင်မတော်လို့ ၀င်ရောက် ကူညီ ရာမှာ ဦးမျိုးဝင်းက ကားပေါ်က ဆင်းလာပြီး ကားနဲ့ အတိုက် ခံရလို့ လမ်းပေါ် သွေးအိုင်ထဲ လဲနေတဲ့ မွန် ပြည်နယ်က အားကစား သမားလေးတွေ ကို မိုက်ရိုင်းစွာ အော်ဟစ် ဆဲဆို နေတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ အဲသည် အပြင် လာရောက် ကူညီ သူတွေကိုပါ “ မင်းတို့က ဘာကောင်း တွေလဲ .. ငါ ဘာကောင်လဲ .. သိလား .. ဘယ်သူ့ ကိုမှ သောက် ဂရု မစိုက်ဘူး ” စတဲ့ ရိုင်းပျတဲ့ အသုံး အနှုန်းတွေ ပြန်ကြားရေး က ဗိုလ်မှူး ဆိုတဲ့ အသုံး အနှုန်းတွေ နဲ့ အာဏာရှင် ဆန်စွာ ပြုမူ ခဲ့တာတွေ ကို သက်သေ မြောက်များ စွာရှိနေ ပါတယ်။ ဦးမျိုးဝင်း ဟာ သူကိုယ်တိုင် လူမှန်း သူမှန်း မသိအောင် မူးရူး နေပေမယ့် သူ့ရဲ့ ရာထူး နဲ့ ပြုမူ ပြောဆို ဆောင်ရွက်ခဲ့ တာကြောင့် ၀န်ကြီး ဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ယဉ်မှု စစ်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဌာနမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ ကို လေးစား စွာနဲ့ အသိပေး ချင်ပါတယ်။ ယခု ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ကြည့်ရင် ဦးမျိုးဝင်းဟာ ဥပဒေနဲပ ညီညွတ်စွာ သွားလာခြင်း မရှိတဲ့အပြင် ရာထူး အာဏာ ကိုပါ အလွဲသုံးစား လုပ်တာကြောင့် ထိထိ ရောက်ရောက် ပြင်းထန်စွာ အပြစ်ပေး အရေးယူ စေချင်ပါတယ်။ဦးမျိုးဝင့်းရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပြည်သူ အများ သိအောင် တရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောဆို စေချင်ပါကြောင်း ကိုတင်ပြ ပါတယ်။
ဖွဘုတ်ပေါ်မှာ ပွထလာတဲ့ ပြန်ကြားရေး ဒုညွှန်မှူး ဦးမျိုးဝင်းကားတိုက်ပြီး မူးရမ်းတဲ့အကြောင်းကိုဖတ်မိပြီး ပြန်လည်ရေးသားလာတဲ့
သူငယ်ချင်းတစ်ဦးရဲ့ မက်ဆေ့ပို့ထားတာကို အဆင်ပြေသလို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..။
နေပြည်တော်မှာ နေတဲ့ အရာထမ်း အများစုက မသောက်တတ်တဲ့သူမရှိဘူး..။ မမူးဖူးတဲ့သူ မရှိဘူး..။ မာဆတ် မသွားဖူးတဲ့သူ နည်းပါ့ဗျား....။
ညဖက် လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းရင်လည်း ဖမ်းသူမရှိ....။ မီးနီဖြတ် ဖမ်းသူမရှိ...။ တိုက်ရင် ကိုယ့်ဘာသာ ရှင်းကြလို့ မျက်နှာလွှဲထားသော လမ်းမကြီးများရှိရာ ဒေသဖြစ်၏ .တဲ့..။
ကားတွေကလည်း without လား လုံးချိန်းလား၊ ကိုယ်ပိုင်လား ဌာနဆိုင်ရာလား မသိ ..။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကလည်း ရှိမရှိ ..မသိ..။
ရဲကို လိုင်းကြေးပေးရင် မျက်စောင်းတောင်ထိုးမကြည့်တဲ့ နေပြည်တော်လိုနေရာမှာ အနှိပ်ခန်းအမည်ခံ ရပ်ကွက်အတွင်းက ...တနိုင်တပိုင်ကြေးစားဂေဟာတွေ၊ ကေတီဗီတွေ ဘီယာဆိုင်တွေ မှာ ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းယောက်ျားတချို့ဟာ ... ၄င်းတို့ရဲ့ လစာထက် အဆပေါင်းများစွာသော ငွေများ သုံးဖြုန်းမကုန်ရာ၊ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးငယ်များထံမှာ စပွန်ဆာ ယူရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးလည်းဖြစ်၏။
ဆရာနဲ့ .. တပည့်မ...ဗိုလ်ကြီးနဲ့ ကျွန်မများရဲ့ မရိုးနိုင်သော သမီးရဲ့ ဦး ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပြဿနာတွေ ရောပြွန်းရာ ရပ်ဝန်းကြီးပါပဲ....။ တစ်ခါ တလေ .. မြို့မဈေး ကုန်းပေါ်က ဘီယာဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်များမှာ ... ရုံးယူနီဖောင်းတွေတောင် မလဲနိုင်ကြပဲ သောက်စားပျော်မြူးနေတဲ့ သမီးနဲ့ ဦးများကို မမြင်ချင်မှ အဆုံး.....။
တစ်လ နှစ်သိန်းမပြည့်တဲ့ လစာနဲ့ Golf Set ထည်လဲ သုံးနေတဲ့ လူတွေလည်း ပေါသဗျ..။
တစ်ပတ်တစ်ခါ လမ်းစရိတ် အကုန်ခံပြန်တဲ့ လစာ ငါးသောင်းဝန်းကျင်ရတဲ့ စာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်း များသဗျ..။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ မရှိတဲ့ ..ကန်တော့ခံပစ္စည်းများ ပြန်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်များလည်း အလုပ်ဖြစ်သဗျ..။ ဒီပစ္စည်း ဒီနေ့ရ ... နောက်နေ့ ပြန်ရောင်း ....။ နောက်တစ်ယောက် လာကန်တော့တာ
ဒီပစ္စည်းပဲ....။ ဒါတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုပဲ....။
၀န်ထမ်းအိမ်ယာ အများဆုံး မြို့နယ်တွေမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ခရိုနီများ စပွန်ဆာပေးရာ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များကလည်း လူပြည့်မြဲ..။ စည်ကားမြဲ ဆိုပဲ..။
ဥပါန္တသန္တိ စေတီကြီး ရှိရာ ..၊ လွှတ်တော်သို့ ဦးတည်ရာ ရာဇဌာနီလမ်းမကြီးအား မာဆတ်ဌာနီ လမ်းမကြီးဟု အမည်တွင်သည်အထိ မာဆတ် (အနှိပ်ခန်း) များပေါများသော ပေါင်းလောင်း ရပ် လည်း ထိုလမ်းကြီးဘေးတွင် ရှိ၏ဟု ကြားသိရ၏။
လွှတ်တော်ကြီးနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် ခရိုနီများ ညဖက် ၀င်ထွက်နိုင်သော ဌာနဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများ၏ အိမ်များ ရှိသည်ဟု ကြားသိရ၏ .။
နေပြည်တော်နှင့် မြို့နယ်များ၏ လူစည်ကားရာနေရာတွင် အရပ်ဖက် စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးများ၏ သားသမီးများပိုင်ဆိုင်သော တိုက်တာအဆောက်အဦးများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ အချက်အချာကျ နေရာယူထားသလို မြန်မာစကား လုံးဝမတတ်သော လူမျိုးများ ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆိုင်ခန်းများ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း လက္ကားဖြန့်ဖြူးရေး ဆိုင်များလည်း မြို့တည်တည်ပြီးချင်း မျက်လှည့်ပြလိုက်သလို ချက်ချင်း မြောက်ဖက်မှ ဆင်းလာပြီး လာရောက် နေရာယူ တည်ဆောက်ထားသည်လည်း ရှိ၏။
တချို့ကပြောကြ၏ ထွန်းမြင့်နိုင်နှင့် ရှစ်လုံးရဲ့ အကျိုးပြုမှုဟု..။
ဒါတွေကို ငေးမောအားကျနေသော ... ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားကတော့ တွေးနေရှာ၏ ....
ငါ့ဝင်ငွေက သူတို့လခတွေနဲ့ သိပ်မကွာပေမယ့် ဘာပြုလို့ ....
ငါ့ထက် အဆပေါင်းများစွာ သုံးဖြုံးပျော်ပါးနေနိုင်နေရသနည်း...။
ဒု-သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းဦးဆောင်သော သမ္မတကြီးရဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု အရေးယူဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ အား အကြံပေးချင်ပါသည်...။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်အထိ စိတ်မကူးပါနဲ့ဦးလို့ သာ.....။
မှတ်ချက်- နေပြည်တော်မှဝန်ထမ်းများ ထိုအချက်များ မှန်မမှန်ကို ကို ဖြေပေးကြစေလိုပါကြောင်း..။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/03/20132အကြံပြုခြင်း
လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဆရာတော်ကို ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့သူများ ဖမ်းဆီးခံရ ။
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာက လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကို ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ ရွာသားတချို့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မြင်းခြံထောင်မှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ ဆရာတော် ဦးကောသလ ကို ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂၆ ) ရက်နေ့က ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာက ရွာသား (၉) ဦး ထဲက (၄) ဦးကို ရဲက ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၊ အခုအချိန်ထိ သူတို့ကို မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့် မပေးကြောင်း ရွာကျောင်း လက်ထောက်ဆရာတော်က မိန့်ကြားပါတယ်။
သွားတွေ့တဲ့သူတွေက အဖမ်းခံရတယ်၊ အားလုံးပေါင်း ၉ ယောက် သွားတွေ့တယ်၊ သွားတွေ့တဲ့သူတွေကို ကျောက်ပန်းတောင်းက ရဲတွေက အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ၄ ယောက်ဖမ်းမိသွားတယ်၊ ဖမ်းမိထားတဲ့ သူတွေကို ကျောက်ပန်းတောင်း ရဲစခန်းထဲမှာဖမ်းထားတယ်၊ အဲ့ ၄ ယောက်ကိုလည်း တွေ့ခွင့်မပေးဘူးခင်ဗျ၊ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ရဲကိုမြင်တိုင်းကြောက်နေတဲ့ဘဝရောက်နေတာပေါ့၊ အိပ်ကောင်းခြင်း မအိပ်ရ၊ စားကောင်းခြင်းမစားရ ဖြစ်နေတာပေါ့၊ ဒီကြားထဲ ရဲကလာရင် ထွက်ပြေးနေရတဲ့သဘောပေါ့၊ ဆရာတော်မရှိတဲ့ အချိန်မှာ ဦးပဇင်းတို့ကျောင်းကိုစောင့်ရှောက်နေရတာပေါ့၊ အာဏာပိုင်တွေက ကျောင်းကိုချိတ်ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေလဲ ကြားနေရတယ်"
ဒါ့အပြင် မနေ့က ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ကို ဈေးဝယ်သွားတဲ့ နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာက ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးကိုလည်း အကြောင်းပြချက် တစုံတရာမပေးဘဲ ရဲက ဖမ်းဆီးပြီး စခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ဆရာတော်က မိန့်ပါတယ်။
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂၄) ရက်နေ့က ကျေးရွာ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ စနစ်နဲ့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ လျှပ်စစ်မီး အစီအစဉ်ကို ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေက ရွာသားတွေကို အသိ မပေးပဲ သူတို့အစီအစဉ်နဲ့ ပေါင်းပြီး မီးပေးတဲ့စနစ် လုပ်လိုက်တာကြောင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ပဋိပက္ခမှာ ဒေသခံတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် (၈၀) လောက်က နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ ရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့် ရွာသား (၄ ) ဦး ဆေးရုံပို့ခဲ့ရပြီး ရွာကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးကောသလကိုလည်း ဖမ်းဆီး၊ ပုဒ်မ ၃၉၂ လုယက်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုပြီး၊ မြင်းခြံထောင်ကို ပို့ခဲ့ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံနေရသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကွေးတိုင်း သံဃာ့မဟာ နာယက အဖွဲ့က အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ကြိုးစားနေသလို၊ မန္တလေးတိုင်း အမရပူရမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့ အဖွဲ့ကလည်း မနေ့က နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာကို သွားရောက်ပြီး ရွာသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဦးဆန်းဆင့် အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် များနှင့် ဆွေးနွေး
သာသနာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး သရေစည်သူ ဦးဆန်းဆင့် အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် များနှင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြား ခဲ့သည့် အမှာစကား
ရန်ကုန်။ ။ (၂၇-၂-၂၀၁၃) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၂) နာရီတွင် သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး သရေစည်သူ ဦးဆန်းဆင့်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူများသည် ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ် (၁၈၃) ရှိ အစ္စလာမ် သာသနာရေးရာ ကောင်စီ ဌာနချုပ် ရုံးသို့ လာရောက်၍ မြန်မာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့ ကြီး၏ တာဝန်ရှိ သူများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံ ပွဲတွင် ဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်မှာ အောက်ပါ အတိုင်း အမှာစကား ပြောကြား ဆွေးနွေး ခဲ့ ပါသည်။
အခုလို ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း များမှ တာဝန်ရှိ သူများကို သာသနာရေး ဝန်ကြီး ဌာနက တွေ့ဆုံတဲ့ ပွဲမှာ ကြွရောက် လာကြတဲ့ ဘာသာရေး အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်များ၊ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ အားလုံး၊ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံ တမန်တော်ရဲ့မေတ္တာ တရား သစ္စာ တရားကို နာခံကြတဲ့ လူကြီးမင်းများ အားလုံး လောကီ၊ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာသော ကောင်းကျိုး မင်္ဂလာတွေ ရရှိ ခံစားနိုင် ပါစေလို့ ကျွန်တော် မေတ္တာ ပို့ပါတယ်။
ကျွန်တော် အခုလို တွေ့ဆုံရတာ အလွန်ပဲ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါတယ်။ ဘာသာရေး အဖွဲ့ အသီးသီးက ခေါင်းဆောင် များနဲ့ တာဝန်ရှိ သူများသည် နဂို ကတည်းက ကျွန်တော် တို့နှင့် ရင်းနှီးပြီး သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးတော့ မိတ်ဆက်စရာ မလိုတော့ ပါဘူး။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ကတော့ ကျွန်တော် ဧရာဝတီ တိုင်းသား တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျုံပျော်မြို့ နယ်မှာ မွေးပါတယ်။ ရေကြည် အသုတ်မှာ ကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော် တပ်မတော် ထဲကို တက္ကသိုလ် ကနေ ကူးပြောင်း သွား ကတည်းက နှစ်ပေါင်း (၄ဝ) ကျော် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ ရာမှာ (၂ဝ၁ဝ) မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးရပ် တိုင်းကနေ ရွေးချယ်ခံရ တာဖြစ် ပါတယ်။ ဧရာဝတီ တိုင်းမှာ ရေကြည်မြို့နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ကနေပြီးတော့ တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် (၂) နှစ် ထမ်းဆောင် ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောရရင် အုပ်ချုပ်မှု အာဏာရ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးထက် ပြည်သူ လူထုရဲ့ အကျိုးကို ထမ်းဆောင် ရတဲ့ ဥပဒေကို ကာကွယ် ထမ်းရွက်တဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ချင် တာ အမှန်ပါပဲ။ သို့သော် လိုအပ်ချက် အရ ပြည်ထောင်စု အဆင့်မှာ တာဝန် ပေးတဲ့ အတွက် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး တာဝန်ကို ယူခဲ့ရတဲ့ အတွက် ယခင် ဧရာဝတီ တိုင်း ဒေသကြီး တစ်ခုတည်း အစား ပြည်ထောင်စု တိုင်း ဒေသကြီး ပြည်နယ် အားလုံးကို ကိုယ်စားပြု ရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ပိုပြီး ကျယ်ပြန့် တယ်လို့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ခံယူမိ ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကနေ့ အုပ်ချုပ်မှု ပိုင်းမှာ ဆောင်ရွက် ရမှာဖြစ် ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ဥပဒေ ပိုင်းနဲ့ အုပ်ချုပ် ရေးပိုင်း ပုံသဏ္ဌာန် အဆင် သဏ္ဌာန် လေးတော့ ကွာခြား ပါတယ်။ ဥပဒေပိုင်း ကတော့ ဥပဒေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဥပဒေရဲ့ အကျိုးပြု မှုကို လွတ်လွတ် လပ်လပ် ဆောင်ရွက် နိုင်တယ်။ အုပ်ချုပ်မှု ပိုင်းကျတော့ အုပ်ချုပ် မှုပိုင်း ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက် ရမယ့် ဘောင်လေးတွေ ကန့်သတ်ချက် လေးတွေ ရှိနေသေး တယ်လို့ ပြောချင် ပါတယ်။ ဒါရှိကို ရှိရတာ ပါပဲ။ ဘယ် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံမဆို မှာလည်းဘဲ ကွဲပြားမှု တွေရှိနေ ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ သွားနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်သည် Reform အခုန သံအမတ်ကြီး လည်း ပြောတယ်။ ကူးပြောင်း နေတဲ့ အချိန် ဖြစ်တယ်။ သို့သော် လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ ခံယူ ပါတယ်။ မြန်မြန် ကူးပြောင်းဖို့ လိုတယ်လို့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နောက်ကလည်း တွန်းပါတယ်။ ရှေ့က လည်း ဆွဲတင်ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အလေ့အကျင့် နည်းခဲ့တဲ့ အတွက် ကနေ့ (၂)နှစ်ကာလ ရှိသွားသော် လည်းပဲ တချို့နေရာ တွေမှာ တော်တော် လေးကို အခက် အခဲတွေ ဖြစ်နေတယ်။ အခုန ညွှန်မှူး အငြိမ်းစားကြီး ပြောသွားခဲ့ သလိုပါပဲ Rule of the law ပီပြင်ပြီလား။ နောက် ဥပဒေတွေ အသက်ဝင် လာပြီလား။ နောက် ဥပဒေ စိုးမိုးမှု ရှိပြီလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဆက်ပြီး မေးလို့ရ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ ကျွန်တော် တို့ အောက်ခြေမှာ Rule of the law ဥပဒေ တွေ အသက်ဝင်ခြင်း၊ ဥပဒေ စိုးမိုးခြင်း တွေ နည်းသေးတယ် ဆိုတာ ပြောလို ပါတယ်။
မနေ့ကပဲ ကြည့်လေ မအူပင်မှာ လယ်သမားတွေ ရေနက်ကွင်း ကိစ္စ ပြဿနာ ဖြစ်ရင်းနဲ့ လာပြီး ထိန်းကျောင်းတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များနဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထိ လက်ရောက် တွေ ဖြစ်တဲ့ အနေအထား။ အင်တာနက် ပေါ်မှာ ပါပြီးသား အကြောင်း အရာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြောင့် အကျယ် ချဲ့ပြီး မပြောတော့ ပါဘူး။ ဒီလိုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကနေ့ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးခွင့် ရပြီ ဆိုတော့ လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ အပြည့်အဝ မရသေးတဲ့ အတွက် ဒီလို ထိခိုက် မှုတွေ၊ ပွတ်တိုက် မှုတွေ၊ ရန်မှုတွေ ရှိနေ သေးတယ် ဆိုတာကို အထူး ပြောစရာ မလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က Reform လုပ်ချင် တယ်။ ဥပဒေ ကြောင်းအရ သွား ချင်တယ်။ သို့သော် လည်းပဲ မပြောင်းလဲ ချင်တဲ့ သူနဲ့၊ ယခင် အတိုင်းကို ပုံသေ အချိုးကျ နေပြီး ဒီအခေါက်ကို မဖြေချင် တဲ့သူတွေ အုပ်ချုပ်မှု ထဲမှာ ရှိသေး သလို ပြည်သူတွေ ထဲမှာလည်းပဲ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကို ထဲထဲဝင်ဝင် မသိသေးတဲ့ အားနည်းချက် တွေရှိ ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မို့လို့ အခု ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြဿနာ တွေမှာ ဒါတွေပါ ပါတယ်။ ကနေ့ ဘာသာရေး အရ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ပြီးရင် ပြောဆို လုပ်ကိုင်ခွင့် တွေသည် လွတ်လွတ် လပ်လပ် လုပ်ကိုင် ခွင့်တွေ ရှိရမယ့် အချိန် ရောက်ပြီဖြစ် သော်လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ထိန်းကျောင်း ပြီးတော့ ချိန်ဆ နေရတယ် ဆိုတာကို ပြောချင်တဲ့ သဘောပါ။ ကျွန်တော်က ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက် အုပ်ချုပ်မှု ပိုင်းကို ရောက်သော် လည်းပဲ ပြည်သူတွေက ရွေးချယ် ပေးတဲ့၊ လွှတ်တော် က ရွေးချယ် ပေးတဲ့၊ သမ္မတကြီးက nominate ပြုတယ်။ ရွေးချယ်ပေး တာသည် ပြည်သူ ပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့ဝန် ထမ်းရမှာဖြစ် တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဌာနမှာ Mind sense ပါပြောင်းပြီး ဆောင်ရွက် သွားပါမယ်။
ဒါကြောင့် မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ရ မလဲဆိုတာကို သိရအောင် တင်ပြချင် ပါတယ်။ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန ရဲ့ လုပ်ငန်း တာဝန်မှာ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က
(၁) ဘာသာ အသီးသီး လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ရှိရန် (ဒါအခြေခံ ဥပဒေမှာ ပါပြီးသားပါ)၊
(၂) ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓ သာသနာတော် သန့်ရှင်း တည်တံ့ပြန့်ပွား ထွန်းကား စေရန်၊
(၃) အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ သာသနာရေး ကိစ္စရပ်များ ကူညီဖြေရှင်း နိုင်စေရန်၊
(၄) မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ရှင်သန် ပေါ်ထွန်းလာ စေရန် (ဒါကျွန်တော် တို့ အားလုံး ဘာသာ အသီးသီးသာ ကွဲသော် လည်းပဲ “မြန်မာလူမျိုး တိုင်းရင်း သားများ” ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ရှင်သန် ထွန်းကားဖို့ ဆိုတဲ့အချက် ဒါကို ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်တယ်။
ထိုနည်း လည်းကောင်းပဲ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ မူဝါဒ
(က) မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသော နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ် ယုံကြည်ခွင် ပြုရန်၊
(ခ) ဘာသာ အချင်းချင်း ချစ်ကြည် ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်ရန်၊
(ဂ) ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်များ အချင်းချင်း ညီညွတ်ရန်၊
(ဃ) ပြဋ္ဌာန်း ထားသော တရား ဥပဒေ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
ကျွန်တော်တို့ ဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်း ထားပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ သွားတာက Rule of the law ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက က ဘာလဲ။ (၂ဝဝ၈)ခုနှစ်က ကျွန်တော်တို့ အားလုံး မဲပေးခဲ့တဲ့ Resemble အရ ပေါ်ပေါက် လာတဲ့ (၂ဝဝ၈) ဥပဒေကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး လိုက်နာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်၊ တိုင်း ဒေသကြီး /ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥပဒေ များကို သိရှိပြီး လိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အစိုးရ ဥပဒေတွေကို သိအောင်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ လိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးရင် တည်ဆဲ ဥပဒေတွေ ရှိပါတယ်။ (၄ဝ၃) ခုရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း လိုက်နာပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာက ထုတ်ပြန်တဲ့ အမိန့် ညွှန်ကြားချက် များကိုလည်း လိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ရောက်ရှိ နေကြတဲ့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ကျွန်တော် မေတ္တာရပ်ခံ ချင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ သွားမှာက ဥပဒေ အတိုင်းဖြစ် ပါတယ်။ ယခင် တပ်မတော် အုပ်ချုပ်ရေး ကာလက အမိန့် ညွှန်ကြားချက် အရ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ များပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ တွေထဲမှာ ကျွန်တော် ကဏ္ဍ အသီးသီးမှာ ပါဝင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူး ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း မှာဆိုရင် အရေးအခင်း ကာလတွေမှာ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ အခြေခံ ကျကျ အောက်ခြေကို ရောက်ပြီးဖြစ် တဲ့အတွက် ဒါတွေကို ကျွန်တော် သိရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ သွားမယ့် ပြည်သူ့ အစိုးရသည် လွှတ်တော် တွေ ပေါ်ပေါက်ပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် လွှတ်တော်တွေ ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ဥပဒေတွေ အတိုင်း လိုက်နာပြီး ဦးဆောင်ပြီး သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တင်ပြ ဆွေးနွေး ခဲ့တာ အားလုံးကို ခြုံပြီးကြည့်မယ် ဆိုရင် အဓိက (၃) ချက်ပါပဲ။
နံပါတ် (၁) အချက်က ကျွန်တော်တို့ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက် များနဲ့ ပတ်သက်လို့ တချို့ နေရာလေး တွေမှာ လိုအပ်ချက် လေးတွေ ရှိနေသေးတယ် ဆိုတဲ့အချက်။
ဒုတိယ အချက်က ဘာသာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ထိခိုက်ပြီး တော့မှ ပုတ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အရေးယူ ပေးဖို့။
နောက်တစ်ခု ကတော့ အားလုံး ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ ချစ်ကြည်ဖို့ အတွက်ကို ဘာသာ ပေါင်းစုံ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ အဖွဲ့ကြီးက တကယ့်ကို ထိထိ ရောက်ရောက်နဲ့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆောင်ရွက် ပေးပါဆိုတဲ့ အချက် (၃) ချက် အကျဉ်းချုံးပြီး ရပါတယ်။
အသေးစိတ် အချက်တွေ ကျွန်တော့်ကို စာနဲ့တင်ထား တာရှိပါတယ်။ ဒီမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြောကြား ခွင့် မရနိုင် ပါဘူး။ တချို့လည်း အခုမှ ကျွန်တော် လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ တင်ပြ ဆွေးနွေးချင် တာကတော့ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက် နေရတဲ့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အဖြစ် အပျက်တွေ၊ မှန်ပါတယ်။ အခု ဘာသာရေး အသင်း အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး များနဲ့ တာဝန်ရှိ သူများ သိကြသလို ဘေးမီးတွေ၊ သွေးထိုးမှုတွေ၊ မလိုတဲ့ သူတွေရဲ့ ဆောင်ရွက် ချက်တွေ၊ ပယောဂတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ ပယောဂတွေ ရှိတဲ့အတွက် ကြောင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းတဲ့ အခြေ အနေတွေ ရှုပ်ထွေး လာအောင် နောက်ပိတ်ဆုံး ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်အောင် ကြံရွယ်နေတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ သဘောပေါက် ပါတယ်။ လူကြီးတွေ လည်း သဘောပေါက် ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ဖို့ လိုသလဲ။ ဥပဒေနဲ့ အညီ ကျွန်တော်တို့ သာသနာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ကတော့ သာသနာရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်း များနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တော့မှ ကြီးတဲ့ ပြဿနာကို ငယ်ပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျော့နည်း ပပျောက် သွားအောင် ဆောင်ရွက် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလက်တွဲ သွားမှာပါ။ ဒီမှာလည်းပဲ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အခန်း (၈) မှာပါတဲ့ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသားရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ တာဝန်တွေ ရှိတယ်။ ဒီအခွင့် အရေးတွေ ခံစားရသလို နိုင်ငံသား တွေမှာ တာဝန်တွေ ရှိတယ်။
အားလုံး ချစ်ကြည်ရင်းနှီး ပြီးတော့မှ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လုံခြုံရေး၊ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး တွေကို မထိ ပါးအောင် အားလုံးမှာ တာဝန် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက် ကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်း လုပ်သွားမှာပါ။ အတတ် နိုင်ဆုံး ဦးဆောင် ပြီးတော့မှ ဆောင်ရွက် သွားဖို့ အတွက်လည်း ကြိုးစား သွားမှာဖြစ် ပါတယ်။ တစ်ခု တော့ရှိပါတယ်။ ပြဿနာ တစ်ခုဖြစ် လာပြီဆိုရင် အေးအေး ဆေးဆေး တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖို့၊ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် အရှိန်အဟုန်တွေ၊ ဒေါသ အရှိန် အဟုန်တွေ၊ အာဃာတ အရှိန် အဟုန်တွေ၊ မကျေ နပ်ချက်တွေကို တဖြည်းဖြည်း လျှော့ပြီး တော့မှ၊ မတူတဲ့ အမြင်တွေကို လျှော့ပြီး တော့မှ သည်းခံပြီး ညှိဖို့လည်း ကျွန်တော် ပြောချင် ပါတယ်။
စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို သွားနေတဲ့ အချိန်မှာ၊ သန့်ရှင်းတဲ့ အစိုးရ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အစိုးရ သွားနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့မှာ ပြုပြင်စရာတွေ အများကြီး လိုနေသေးတဲ့ အတွက်ကြောင့်၊ ဒီ အခက် အခဲ တွေက အောက်ခြေမှာ ရှိနေသေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် မအောင်မြင်တာ လေးတွေ ရှိနေ ပါတယ်။ ဟန့်တားတာ တွေရှိတယ်။ အထစ် အငေါ့ဖြစ် နေသေးတာတွေ ရှိတဲ့အတွက် ဒီနေ့ ဒါလည်း ဧရာဝတီ တိုင်းရဲ့ သာဓက ပါပဲ။ မနေ့က မအူပင် မလက်တိုမှာ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာ လည်းဒါပဲ။ ဒါဘာလဲ ဆိုတော့ ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းရင်း၊ ဖြေရှင်းရင်းနဲ့ မပြေလည်တဲ့ ဟာတွေ ဖြစ်တယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အလျှော့ မပေးဘဲနဲ့ တဖြည်းဖြည်းကြီး ထွားလာတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒီကနေ့ ကျွန်တော် တို့က ဒီအဖြစ်မခံ ပါဘူးဆိုပေမယ့် အခုတင်ပြတဲ့ အချက်တွေကို ကြည့်ရင် ဘာသာ တစ်ခုကို တစ်ခု ပုတ်ခတ် စော်ကားပြီး ဒီလိုဖြစ်လာ ပြီးတော့မှ ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဟာ တွေကို သွေးရိုး သားရိုးမ ဟုတ်ဘူး ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဘာလုပ်ရမယ်။ အနာကို သိအောင် လုပ်ပြီးတော့မှ တည့်တဲ့ ဆေးကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရပါမယ်။ ဆေးမြီတို လုပ်လို့ မရတော့ဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့လည်း မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အမြန်ဆုံး ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း အဖြစ်မှန်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး တော့မှ ဒီဟာကို ဘယ်သူ လုပ်သလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ တရား ဥပဒေ ကြောင်းဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ် မှုပိုင်း ဆိုင်ရာကို ဆောင်ရွက်တဲ့ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဌာနနဲ့ ညှိနှိုင်း ပေါင်းစပ်ပြီး ဆောင်ရွက် သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ် လို့လဲဆိုတော့ ၉၈/၉၉ မှာ ဗလီတွေ ဖျက်တယ် ပြုတယ်။ ပြီးတော့မှ မွတ်စ်လင်မ် အိမ်တွေ မီးရှို့တယ်။ ဒီတုန်းက တုတ်တွေ၊ ဓားတွေ၊ ရဲတင်းတွေနဲ့ အကြမ်းဖက် တဲ့ဆီသွားတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော် စစ်ဒေသမှူး နဲ့လည်း ပါခဲ့တယ်။ ဒု တိုင်းမှူး အနေနဲ့ တာဝန်ယူခဲ့ ရတာ ကိုလည်း ရှင်း ပြမယ်။ ကျွန်တော် တာဝန် ထမ်းဆောင်တဲ့ ကာလဟာ ပြောရ လို့ရှိရင် အပြင်း ထန်ဆုံး ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးထက် သံယိုမှု အနည်းဆုံးနဲ့ အပျက်အစီး အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ စဖြစ်တာ ဘယ်မှာလဲ။ မိုးကောင်း ဘုရားနားက ရန်ကင်း ဗလီမှာ စဖြစ်တာ။ ကျွန်တော်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦးက ကံဘဲ့ ဆရာ အတတ်သင်မှာ ရှိနေတယ်။ ကျွန်တော်က တာမွေ ဗလီ ဆိုတော့ တာမွေဗလီကို သွားတယ်။ ဟိုရောက်မှ ရန်ကင်း ဗလီကို ပြန်ပြေးရတယ်။ အထဲမှာ မီးစပြီးတော့ လောင် နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အချိန်မီတား နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကြီးကြီးမားမား မဖြစ်အောင် ကျွန်တော် တို့ ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အစဉ်အလာ ကောင်းတွေရှိ ပါတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။
ဒါကြောင့် မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါ့မယ်။ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားတဲ့ အဆင့် မရှိအောင် ကျွန်တော်တို့ သက်ဆိုင်ရာ ကလည်း ပဋိပက္ခ အသွင်အပြင် ရောက်အောင် ဖန်တီး နေတဲ့ ဟာတွေကို လေ့လာ ဖော်ထုတ် ပြီးတော့မှ၊ အထင်အမြင် လွဲမှားနေမှုတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် လိုက်ပြီးတော့မှ ဆရာတော်၊ သံဃာတော် များကို ကျွန်တော်တို့ သံဃာ့ အစည်းအရုံး များနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး တော့မှ မဖြစ်သင့် တာတွေ မဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ တာဝန်ရှိ တယ်လို့ လည်း ခံယူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က လိုက် စည်းရုံး ပြောသလို တစ်ဖက် ကလည်း အုပ်ချုပ်မှု ပိုင်းပါ လက်တွဲပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ရ မှာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ တစ်ခု တည်းနဲ့ မရပါဘူး။ ဒီမှာပါတဲ့ ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့ တွေ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့ တွေ၊ ရပ်မိ ရပ်ဖ တွေ၊ ပြီးလို့ရှိရင် အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းဆိုင် ရာမှာ ထွေအုပ် တွေ၊ လုံခြုံရေး အရ အကာအကွယ် ပေးရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ် တွေပါ ညှိနှိုင်း ပေါင်းစပ်ပြီး တော့မှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ် ဆိုရင် ကြီးကြီး မားမား ပြဿနာ မရှိဘဲနဲ့ ဒါတွေဟာ ကင်းဝေး သွားမယ့် အခြေ အနေ ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် မို့လို့ စိုးရိမ် သောကကြီးပြီး တော့မှ ကာကွယ်ဖို့ လုပ်ရင်း လုပ်ရင်းနဲ့ ပိုပြီးတော့မှ မဖြေရှင်း နိုင်တာတွေ ဖြစ်ပြီး မကြီးထွား စေချင်ဘူး ဆိုတာတွေ လည်း ကျွန်တော် တွေ့ကြုံ ခဲ့တဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေ ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တော့မှ ဒီမှာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး များနဲ့ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေနဲ့ သားသမီး များ၊ ဘာသာဝင် လူငယ် လူရွယ်များ ကိုလည်းပဲ ထိန်းကျောင်း ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကလည်း ဒါကို မဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒါဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ် ဘူးလေ။ အခြေခံ ဥပဒေမှာ လည်း အချင်းချင်း ညီညွတ် ရမယ်လို့ ပြောပြီး သားပါ။ ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ပြုတယ်။ ပုတ်ခတ်တယ်။ တိုက်ခိုက်တယ် ဆိုရင်လည်း ဥပဒေတွေ ရှိပြီး သားပါ။ ဥပဒေ နဲ့အညီ အရေးယူ ပါမယ်။ Rule of the law အရ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးအောင်၊ ဥပဒေ စိုးမိုးမှု ရှိအောင် လုပ်လိုက် လို့ရှိရင် မကြီးထွား တော့ပဲနဲ့ တဖြည်းဖြည်း လျော့ပါး ပပျောက် သွားမယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ ယုံယုံ ကြည်ကြည်နဲ့ ဆောင်ရွက် ပေးပါ။ ကျန်တဲ့ အခုန တင်ပြတဲ့ အချက် တွေသည်၊ အချို့ ကိစ္စတွေသည် နေရာပေါ်မှာ မူတည် နေတာလည်း တွေ့ရ ပါတယ်။
တချို့ အများစု ဘာသာဝင် တွေရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ဘာဖြစ် နေသလဲ ဆိုတော့ သူတို့ နေရာဒေသ တွေမှာ ရှိနေတဲ့ လူထုအများစု သဘောတူညီ မှုမရရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ချက်ချင်း မလုပ်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော် တို့ ထိန်းသိမ်း ရတာတွေ၊ ဂရုစိုက် ရတာတွေ၊ ဆင်ခြင် ရတာတွေ ရှိတတ် ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော် ပြောရလဲ ဆိုတော့ ဒီနေ့ သွားနေတာ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ။ ကျွန်တော်တို့ လက်ငါးချောင်း မတူပါဘူး။ ဒီအဖွဲ့ကြီး ငါးဖွဲ့မှာလည်း အားလုံးတစ်ညီ တစ်ဖတ်တည်း ဆိုတာ ဖြစ်ကို မဖြစ်နိုင်ပါ။ အများ ဆန္ဒကို ကိုယ်က သဘော တူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူ သည်ဖြစ်စေ၊ ကြိုက် သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက် သည်ဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်မှာ မဲခွဲတဲ့အခါ လက်ညှိုး ထောင်တယ်။ မဲပေးတယ်။ စက်ခလုပ် နှိပ်တယ်။ ဘယ်နည်းနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် အများ ဆန္ဒကို ယူပြီးတော့မှ ဥပဒေတွေ ပေါ်ထွက်တယ်။ အများ ဆန္ဒ ကို လိုက်နာ ရပြီးတော့ အနည်းစုကို အလေးထား တာပါ။ ကနေ့ ကျွန်တော်တို့ သွားတာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့ ပြည်သူ့ အစိုးရ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါ တစ်ရံမှာ ချက်ချင်း လုပ်ချင်ပေမယ့် ဒီအရ Right ဆိုတာရှိပေမဲ့ ချက်ချင်း လုပ်လိုက်ရင် ကနေ့ ပြည်သူ အကုန်လုံးက အမြင်မကျယ် သေးဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ တချို့ အယူသီးတာ ရှိတယ်။ ဘာသာရေး အစွဲလန်း ကြီးတာ တွေရှိတယ်။ ဒီလို ဖြစ်နေတာတွေ ရှိတာကြောင့် ချက်ချင်း လုပ်လိုက် လို့ရှိရင် အများရဲ့ မကျေနပ်ချက် တွေဖြစ် လာမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အာဃာ တတွေ ပြင်းထန် လာပြီးတော့မှ ကိုယ်ထိ လက်ရောက် အလွန် အကျွံတွေ မဖြစ်စေချင် တာကြောင့် တချို့ နေရာလေး တွေမှာ ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း လုပ်ရမယ့် အချိန်လေးတော့ စောင့်ရမယ့် အခြေအနေ လေးတွေ ရှိနေ ပါတယ်။ ဖြစ်ပျက်တဲ့ ပြဿနာတွေ ကိုလည်းပဲ မှန်မှန် ကန်ကန်နဲ့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက် ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာန မှာလည်း ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီး (၅) ဖွဲ့နဲ့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက် နိုင်အောင် တာဝန်တွေ သီးသန့် ထပ်ပေးပါ့မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ နေပြည်တော်မှာ ဝန်ကြီးနဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဒု ဝန်ကြီးနဲ့ ချက်ချင်း မတွေ့ရ နိုင်တဲ့အခါ ဘယ်သူနဲ့ ဆက်သွယ် ရမှန်းမသိ မဖြစ်ရအောင် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက် နိုင်အောင် လည်းပဲ တာဝန်ပေးပြီး ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီး များနဲ့ ချိပ်ဆက် ပေးထား ပါမယ်။ အချိန်မရွေး အဖြစ်မှန် သတင်းမှန် တွေကို အသိ ပေးပါ။တစ်စုံ တစ်ရာ ဖြစ်လာ ခဲ့ရင် အုပ်ချုပ်မှု အာဏာ၊ တရား စီရင်ရေး အာဏာကို ဆောင်ရွက် နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ ပူးပေါင်း ညျှိနှိုင်းပြီးတော့ ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ တင်ပြပြီး ဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ် ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သာသနာရေး ကတော့ အဓိက တာဝန် အရှိဆုံးပါ။ သို့သော် လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ သာသနာရေး ကကြီးပဲ လုပ်လို့မရ တာတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက် ရမယ့်ဟာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အခုန ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ဦးက ပြောသွား တာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သာသနာရေး ဝန်ကြီး ဌာနကို မိဘလို ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန် ထမ်းဆောင် နေသော သူများသည် ပြည်သူ့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ သည်သာ အမိအဖ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေး ကျွန်တော် ပြောချင်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင် ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ မှာတာဝန်ရှိ တယ်လို့ ခံယူပြီးသားပါ။ ဟိုတုန်း ကလည်း ခံယူ ပါတယ်။ ဟိုတုန်းက ကျွန်တော်တို့ ဝန်ထမ်း ကျင့်ဝတ်မှာ ရှိတယ်။ “သူ့မြေမှာနေ၊ သူ့ရေ သောက်၊ သူ့အမွေး ပေါက်ရမယ်”ဆိုတဲ့ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ် ရှိပါတယ်။ ဒီမှာ ဝန်ထမ်းက ထွက်တဲ့ ညွှန်မှူး ဟောင်း ကြီးတွေ ပါပြီးသား။ ဝန်ထမ်းရဲ့ နီတိ ကျင့်ဝတ် ထဲမှာ ပါပြီသား။ ပြည်သူ့ တာဝန်၊ အဲဒီ ဒေသရဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းရမှာ ဝန်ထမ်း တွေရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြောင့် ကျေကျေ ပွန်ပွန် ထမ်းရွက် နိုင်ဖို့ အတွက် ပြောင်းလဲ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့က အာဏာပိုင်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော် တို့က ကယ်တင်ရှင် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့သည် ပြည်သူက ပေးတဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင် ရမှာဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေ ကျွန်တော်တို့ ဌာနနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ နေရာမှာ အခက် အခဲတွေ မဖြစ် ရအောင် ကျွန်တော်တို့ ပြင်ပါမယ်။
နောက် တချို့ အကန့် အသတ်၊ အတားအဆီး၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ နေတာတွေ ရှိတယ်။ ဟို ထောက်ခံ ချက်တွေ၊ ဒီထောက်ခံ ချက်တွေ၊ ဟဂ်ျသွားချင်တဲ့ ထောက်ခံချက်၊ ပြီးတော့ ဘာလုပ် ချင်တဲ့ ထောက်ခံချက်၊ ရှင်ပြု ပဉ္စင်းခံက အစ၊ နောက် သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာ ထည့်တာက အစ ကျွန်တော် တို့ ဆီက ထောက်ခံချက် တောင်းရတာ တွေရှိတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့က ထောက်ခံရင်ပြီးတဲ့ကိစ္စ ကျွန်တော်တို့ သာသနာရေးကို လာလာပြီး ယုနေရတာတွေဖြစ်နေတယ်။ တချို့နေရာတွေသည် ထိန်းရင်း ထိန်းရင်းနဲ့ အကန့်အသတ်တွေ၊ အကန့်တွေများပြီး ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ အခြေအနေတွေ၊ ဖြေလျှော့ပေးရမယ့် အနေအထားတွေ မြင်နေပါပြီ။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ အပိုင်းက ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ ဒီအပြင် ကျွန်တော်တို့ ဌာနအနေနဲ့ စီးပွားရေး ကိစ္စ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တွေမှာ ဝင်ရောက်ပြီး ဆက်နွယ် တဲ့ဟာ တွေလည်း မဆောင်ရွက် တော့ပါဘူး။
ဒါပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောလိုက် တာပါ။ ကျွန်တော်တို့က သက်ဆိုင်ရာကို အားပေးပြီး ကူညီပေး တာပဲရှိရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဝင်ရောက်ပြီး စွက်ဖက် ဆောင်ရွက်တဲ့ ကိစ္စများ ရှိနေရင် လည်း အချိန် မရွေး ကျွန်တော့်ကို ကိုယ်တိုင် သော်လည်း ကောင်း၊ စာရေး၍ သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ် အကြောင်း ကြားပေးပါ။ ညှိနှိုင်းပေးပါ။ ဒါတွေကို ဥပဒေနဲ့ အညီ ပြင်ဆင် သွားဖို့အတွက် ရည်ရွယ် ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် နောက်ဆုံး ပြောချင်တာ ကတော့ “ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပါ”။ ကျွန်တော်တို့ ကလည်း ကနေ့ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနဲ့ အများ ပြည်သူရဲ့ အခက်အခဲ တွေကို ဥပဒေနဲ့ အညီ ကူညီဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် သွားပါမယ်။ ဥပဒေနဲ့ မညီတာတော့ လုံးဝ ကူညီမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော် လည်း ဥပဒေနဲ့ မညီတာရှိရင် ကျွန်တော် ပြင်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ အပိုင်းကလည်း ဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့ အားနည်းချက် တွေရှိရင် လည်း အချိန်မရွေး ထောက်ပြ ကြပါလို့ ကျွန်တော် ဖိတ်ခေါ် ပါတယ်။ ဒီလို ထောက်ပြတဲ့ အတွက်ကိုလည်း အာဃာ တတွေ၊ အမြင်မှားတဲ့ မကြည် လင်တဲ့ ဟာတွေ ကျွန်တော် တို့မှာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ရိုးရိုး သားသား ဖြစ်သလို ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့ များကလည်း ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ရိုးရိုး သားသားနဲ့ ဆက်ဆံ စေချင်ပါတယ်။ ရှိခဲ့လို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာန ပိုင်းကလည်း ကျွန်တော်နဲ့ တကွ ဝန်ထမ်းများ ရိုးသား ပွင့်လင်းစွာနဲ့ ဆောင်ရွက် သွားမှာ ဖြစ်သလို ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ များကလည်း ကျွန်တော်တို့ ဌာနပေါ်မှာ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ရိုးရိုး သားသား မည်သည့် ကိစ္စမဆို ဆက်ဆံ ပေးပါ။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အမြင်တွေ ရှင်းပြီးတော့ လုပ်ရ ကိုင်ရတာ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် နိဂုံးချုပ် ပြောလိုတာက အခုလို တွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ်တော့ ကျွန်တော်ပြော လိုက်ပါတယ်။ အရှိ အတိုင်းပဲ သွားမယ်။ ရှိတဲ့ နေရာမှာပဲ တွေ့ဆုံပြီး တော့မှ တကယ့် အနှစ်သာရ ရှိချင်တာပါ။ အခမ်း အနားတွေ၊ အပြင် အဆင်တွေ ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ပါနဲ့။ ကျွေးတာ မွေးတာ တွေလည်း မလုပ်ပါနဲ့။ ရေနွေးကြမ် လေးနဲ့ ရေသန့်လေး ပဲတိုက်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ မလိုချင်ဘူး။ ကျွန်တော် ပြောပြီးသားပါ။ ကျွန်တော်တို့ အတွက်နဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ် စေလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော် တို့က အရှိ အတိုင်း ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဆောင်ရွက် သွားမယ်။ ရိုးရိုး ရှင်းရှင်းနဲ့ ဆောင်ရွက် သွားရမယ်။ ကနေ့ ပွင့်လင်း မြင်သာတဲ့ ခေတ် ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ဒီအတိုင်း ကျင့်သုံးသွားဖို့ ကျွန်တော် တို့လည်း ပြုပြင်သွား ပါ့မယ်။ပြည်သူကို ပြင်ခိုင်း ပြင်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော်တို့ မပြင်ဘူး ဖြစ်နေရင် ကျွန်တော်တို့ မှားသွား မှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ကစပြီး ပြင်ရမယ်လို့ ခံယူတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် စတင်ပြီး ပြုပြင်နေ ပါတယ်။ ဒီလိုပြုပြင် မှုမှာ အားလုံး ဝိုင်းဝန်းပြီး ကူညီပေးပါလို့ တင်ပြ လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ အခုလို တွေ့ဆုံခြင်းသည် ကျွန်တော် တို့ရဲ့ အောင်မြင်ခြင်း အစဖြစ် ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ပညာရှင်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဟင်နရီ ဖော့ဝဒ်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
အခုလို လာရောက် တွေ့ဆုံခြင်း သည် အစဖြစ် ပါတယ်။ အခုလို ခင်ခင်မင်မင် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းနဲ့ ဆောင်ရွက် လို့ရှိရင် တိုးတက်မှု ဖြစ်လာပါ လိမ့်မယ်။ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားကြမယ် ဆိုရင် အောင်မြင်မှု သည် မလွဲဧကန် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယုံယုံ ကြည်ကြည်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ပေးပါလို့ မေတ္တာ ရပ်ခံရင်း နိဂုံးချုပ် အပ်ပါတယ်။ အားလုံး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျား။
စစ်တွေမြို့ မာန်စီ ကျေးရွာ အနီးရှိ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် ချာရီယာ ဥပဒေဖြင့် တရားစီရင်မူများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ယခုလက်ရှိ ရရှိသော သတင်းအရ မာန်စီကျေးရွာ အနီးရှိ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များက ချာရီယာ ဥပဒေဖြင့် တရားစီရင်မူများ ရှိနေရာ တချို့သူများမှာ သေဒဏ် အထိ အပြစ်ပေးခံနေကြရသည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာ စစ်တပ် အပါအ၀င် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့်လည်း ဒုက္ခသည် စခန်း အတွင်းထဲသို့ မသွားရဲကြသဖြင့် မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များက ချာရီယာ ဥပဒေဖြင့် တရား စီရင်မူများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြုလုပ် နေကြသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ - See more at: http://www.narinjara.com/burmese/?p=4600#sthash.gg1w7orM.dpuf
လို့ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးလှဆွေက ပြောပါတယ်။
ဒီဗွီဘီ သတင်းထောက် ကိုရွှေအောင်က ဆက်သွယ် မေးကြည့်ထား ပါတယ်။
မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပနေစဉ် သတို့သမီးဓားနဲ့အထိုးခံရ
Written By နေဇော်လင်း- မီဒီယာ on Thursday, February 28, 2013 | 11:15:00 PM
မလေးရှားနိုင်ငံ ကေအယ် ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ ရွှေတောင် မြန်မာ စားသောက်ဆိုင်၌ မောင်ဇော်မိုးလွင်(ခ) ကျော်ကျော်လွင် နှင့် မသန်းသန်းမြင့်(ခ)မလေးတို့၏ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပနေစဉ် အချိန်အတွင်း သတို့သမီး ဓားထိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်တာက ၂၇.၂.၁၃ ရက်နေ့ ညနေအချိန်ပိုင်း မင်္ဂလာပွဲလုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်သွားတာပါ။ ဧည့်ခံပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန် ရုတ်တစ်ရက် သတို့သမီးဖြစ်တဲ့ မလေးကို ဓားနဲ့ထိုးခံရတဲ့အတွက် မင်္ဂလာခန်းမအတွင်းမှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
သတို့သမီး မလေးမှာ ဗိုက်မှာဒဏ်ရာနဲ့ ဘယ်လက်ဖက်တို့မှာ အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်။ သတို့သမီးကို အရေးပေါ် ကွာလာလမ်ပူဆေးရုံသို့ ပို့လိုက်ကြတယ်။ ဓားနဲ့ထိုးသူကို ခန်းမထဲက လူတွေချုပ်ထားလိုက်ပြီး " ရဲလက်ထဲ အပ်လိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်ဟု" အခင်းဖြစ်ပွားနေရာသို့ သွားရောက်သော ကိုအောင်မှ ဆိုသည်။
ဓားဖြင့် ဝင်ထိုးသူမှာ မင်းနိုင်(ခေါ်)ညီလုံး ဖြစ်ပြီး အခင်းဖြစ်ပွားရာနေတွင် လူအများမှ ရဲလက်သို့ အပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒဏ်ရာရရှိသော သတို့သမီးဖြစ်သူ မလေး အား၎င်းနေ့ ညအချိန် တစ်နာရီမှ စတင်၍ လိုအပ်သောခွဲ့စိတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကာ နေ့လည် ၁၁ နာရီအချိန်တွင် ခွဲစိတ်မှုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ မလေး၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှာ ကောင်းမွန်လာပြီး ဆက်လက်၍ ဆေးကုမှု ခံယူနေကြောင်း ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူတစ်ဦးမှ အွန်လိုင်း ရေဒီယို မီဒီယာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
Yuzana Nway's photo.
များသည်အဆောင်သို့ပြန်လာကာသူတို့၏အခန်းတံခါးသော့များကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖျက်၍သူတို့၏ပစ္စည်းများကိုယူဆောင်ကာ လူယုတ်မာဥာဏ်ဖြင့်မြန်မာတို့အားမကောင်းသတင်းလွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ရန်ကုန်မြို့ကနေ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့အထိ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ချီတက်လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အဖွဲ့ဟာ ဟိုပင်မြို့ကနေ ၉ မိုင်ကွာဝေးတဲ့ မိုးကောင်းမြို့နယ် ထုံးရေပေါက်ကျေးရွာကို ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအဖွဲ့ထဲကနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်မင်းနိုင်ဟာ ရေကျောက်ပေါက်တဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရပြီး ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ အူကျဝေဒနာ ခံစားနေရတာကြောင့် ဒီကနေ့ မြစ်ကြီးနားပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတယ်လို့လဲသိရပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမြို့နဲ့ မိုင် ၁၀၀ လောက်ကွာဝေးတဲ့ မိုးညှင်းမြို့နယ် ဆေးရုံကတဆင့် မတ်လ ၁ ရက်မနေ့ည ၁၁ နာရီလောက်မှာ မြစ်ကြီးနားဆေးရုံကို သယ်ဆောင်ဆေးကုသ ပေးနေရတာလို့ လူနာနှစ်ယောက်နဲ့ အတူလိုက်ပါလာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်အဖွဲ့မှ ကိုဇင်ကိုကိုက ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA ကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
"လောလောဆယ်အနေအထားကတော့ ကိုအောင်မင်းနိုင်ကတော့ ညကဆရာဝန်များရဲ့ပြောကြားချက်အရကတော့ ရေကျောက်ပုံစံလို ဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ ဖျားတာတို့ နာတာတို့တော့ရှိမယ်၊ ဒီအနာတွေကို ဗိုင်းရပ်ပိုးတွေမှာဆို ပိုးသတ်ဆေးတွေ ထိုးပေးထားတဲ့ အနေအထားရှိတယ်ဗျ၊ မနက်ပိုင်း အခြေအနေမှာတော့ ဒီမျက်နှာမှာပေါက်နေတဲ့ အဖုလေးတွေကတော့ နည်းနည်းပြန်ပြီးချောက်သွားတဲ့အပိုင်း ရှိတယ်ဗျ၊ နည်းနည်းတော့ သက်သာတဲ့ပုံစံလေးတော့ တွေ့ရတယ်ခင်ဗျ၊ ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်ရဲ့ အခြေအနေကတော့ လက်ရှိအခြေအနေကတော့ ဆရာဝန်တွေက ဘာမှပြောကြားခြင်း မရှိသေးဘူးခင်ဗျ၊ လောလောဆယ်အနေအထားကတော့ သူတို့က ဒီဆေးရုံမှာပဲထားပြီးတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားခင်ဗျ"
အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်အဖွဲ့ထဲမှာ သံဃာတော်၊ သီလရှင်နဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး စုစုပေါင်း တစ်ရာကျော်ပါဝင်ပြီး ဒီကနေ့မနက် ၇ နာရီလောက်မှာ ကချင်ပြည်နယ် ဟိုပင်မြို့ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ထုံးရေပေါက်ကျေးရွာက ရာမဝိမလဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ညအိပ်ရပ်နားမှာဖြစ်ပြီး ညနေပိုင်းမှာ ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ လိုင်ဇာအထိ လမ်းလျှောက်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက်နေ့ကစပြီး ရန်ကုန်ကနေ စတင်ထွက်ခွာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်သဇ္ဇဏ၏ မီးလောင်ဒဏ်ရာများမှာ Phosphorous (ဖေ့ါစဖရပ်အဖြူ) . . ကြောင့်
မီးလောင်ဗုံးဒဏ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင်သွားရောက်ကုသ၍ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော ရှင်သဇ္ဇဏ၏ မီးလောင်ဒဏ်ရာများမှာ
လုံးဝသက်သာပျောက်ကင်းမှုမရှိဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံစစ်ဆေးရုံတာဝန်ခံဆရာဝန်၏ မှတ်ချက်ထဲတွင် Phosphorous ကြောင့်ဟု
မန္တလေး FM က ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၊ အာမန်မြို့တော်အနီး CMJ စက်ရုံအယောက် ၃၀ ကျော်ပဲ ဆန္ဒပြသည်ဟုထုတ်လွှင့်
Htay Aung --အဲဒီအလုပ်သမားတွေကို ဂျော်ဒန်နိုင်ငံကိုပို့ ပေးခဲ့တဲ့
တရားဝင်အေဂျင်စီမဟုတ်တဲ့ကိုယ်စလှယ်ကိုစိုင်းကလူရောင်းစားမှု့ ကိုကျူးလွန်ထားတဲ့သဘောဖြစ်နေလို့ 
အဲဒီကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌါနအရာရှိတွေက မကိုင်တွယ်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၊ အာမန်မြို့တော်အနီး CMJ စက်ရုံက ဆန္ဒပြနေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို အလုပ်သမား ကြီးကြပ်ရေးမှူးတွေနဲ့ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံသားတချို့က ဒီနေ့အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် မြန်မာအမျိုးသမီး ၄ ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။
“ဒီကနေ့မနက်က တရုတ်တွေ supervisor တွေ အများကြီးလာပါတယ်၊ ဒီနိုင်ငံသားတွေလာပြီးတော့ မိန်းကလေးတွေကို ရိုက်ပါတယ်၊ အလုပ်မဆင်းတာကို ရိုက်ပါတယ်၊ လက်သီးတွေနဲ့ ထိုးပါတယ်၊ နှုတ်ခမ်းတွေ မျက်လုံးထိခိုက်မှုတွေ ခြေထောက်နည်းနည်း နာသွားတာတွေရှိပါတယ်၊ မြန်မာ ၁ ထောင့် ၃ ရာကျော် ရဲစခန်းကို သွားတိုင်ပါတယ်၊ ရဲစခန်းကို သွားတိုင်ပြီး ပြန်လာတာပါ၊ ဆန္ဒကအခုပြတုန်းပါပဲ၊ တစ်ယောက်မှ အလုပ်မဆင်းပါဘူး၊ မနေ့က ကြေညာချက် သူတို့လိုက်ကတ်တာက အလုပ်ဆင်းခိုင်းတာပါပဲ၊ ကျနော်တို့ကတော့ အလုပ်မဆင်းဘူး၊ အလုပ်အေဂျင်စီက နှစ်ယောက်ကတော့ လုံးဝပျောက်နေပါတယ်၊ လုံးဝရှာမတွေ့ပါဘူး၊ ကျနော်တို့က အလုပ်သမားရုံးတွေမှာ ငြိမ်သက်စွာ လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ ဆန္ဒပြကြပါတယ်၊ ကျနော်တို့မြန်မာတွေ အကုန်လုံးပြန်ပို့ရင် ပြန်လာကြမှာပဲ”
အခုလိုအကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ရဲစခန်းမှာ သွားပြီးတိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံက CMJ စက်ရုံမှာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား ၁ ထောင့် ၃ ရာကျော် ရှိနေပြီး၊ သူတို့အားလုံး အလုပ်မဆင်းပဲနေတာ ၂ ပတ်ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
“မန္တလေး FM က အယောက် ၃၀ ကျော်ပဲ ဆန္ဒပြတယ်လို့ သူတို့ပြောတာပါ၊ တကယ်တော့ အယောက် ၃၀ ကျော် မဟုတ်ပါဘူး၊ အယောက် ၁၀၃၀ ကျော်ပါ၊ တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတာပါ၊ ပြီးတော့ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကို အကြောင်းကြားထားပါတယ်၊ အဲဒါဘယ်သူမှ ကူညီမယ့်သူလဲ မလာသေးပါဘူး၊ အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတော့လဲ သူတို့ကဘာမှလုပ်ဆောင်မပေးပါဘူး”
ဆက်ပြီးမလုပ်လိုတော့တဲ့ အလုပ်သမားတွေ ပြန်မယ်ဆိုရင် စီစဉ်ပေးမယ်လို့ အလုပ်ရှင်ဘက်က ပြောတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကလဲ မှားယွင်းနေတယ်လို့ အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
လက်ပန်းတောင်တောင်ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ပြသခဲ့သော ရုပ်သံမှတ်တမ်း။
လက်ပံတောင်းတောင်အရေး (သီချင်း - လားရှိုးသိန်းအောင်)။
ပုံနှိပ်ဥပဒေမူကြမ်းအားလုံးဝ လက်မခံကြောင်း တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ကန့်ကွက်
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရေးဆွဲထုတ်ပြန်သော ပုံနှိပ်ဥပဒေမူကြမ်းအား သတင်းမီဒီယာကောင်စီ အပါအ၀င် မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှင့် ဂျာနယ်လစ်များက လုံးဝ လက်မခံကြောင်း တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ကန့်ကွက်
Sunday, 03 March 2013 11:59
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့က နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပုံနှိပ်ဥပဒေ မူကြမ်းမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅၄ (က) ပါ လွတ်လပ်စွာ ဖြန့်ချိထုတ်ဝေခွင့် ရှိသည်ဆိုသော အချက်နှင့် ကွဲလွဲနေပြီး အာဏာရှင်စနစ် တည်ထောင်ရန်ရေး ဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို အသွင်ပြောင်းထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာကောင်စီ အပါအ၀င် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့အစည်း အားလုံးနှင့် ဂျာနယ်လစ်များက တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ကန့်ကွက်လိုက်ကြသည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သော ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းဥပဒေကြမ်းတွင် အခန်းရှစ်ခန်းနှင့် ပုဒ်မ ၂၈ ခု ပါဝင်ပြီး သတင်းမီဒီယာအား ချုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမှ ထိန်းချုပ်ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရိုးသားမှုမရှိသော ဥပဒေကြမ်းဖြစ်ကြောင်း စာနယ်ဇင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဂျာနယ်လစ်များက ကန့်ကွက်ပြောဆိုကြပါသည်။
ဥပဒေကြမ်းအရ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လိုသော ပုံနှိပ်သူနှင့် ထုတ်ဝေသူများသည်လည်းကောင်း၊ သတင်းအေဂျင်စီ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လိုသော ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လည်းကောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခန့်အပ်ထားသော မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံတွင် လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြုရန် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မှတ်ပုံတင်အရာရှိအနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်အား ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းနိုင်ကြောင်း ပါဝင်နေသဖြင့် ယခင်တည်ရှိခဲ့သော စာပေစိစစ်ရေး လက်ထက်က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသာဖြစ်ကြောင်း ဂျာနယ်လစ်များက ဝေဖန်ထောက်ပြကြသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးခြင်းခံရသော ဦးအောင်ကြည်က စာနယ်ဇင်းအမြုတေကောင်စီကို ဖျက်သိမ်းပြီး စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) ကို ဖွဲ့စည်းစဉ်က မီဒီယာဥပဒေအား စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ)နှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းရေးဆွဲကြမည်ဟု ပြောဆိုထားခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို့ စာနယ်ဇင်းလောကသားများ မသိအောင် ရေးဆွဲထားသည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို ထုတ်ပြန်ခြင်းမှာ မရိုးသားခြင်းပင် ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဝေဖန်ကြပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် မီဒီယာလောကကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် တစ်ဖက်သတ် ရေးဆွဲထားသည့် "ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းဥပဒေကြမ်း" အား စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့အစည်း အားလုံးက ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပြီး ယင်းဥပဒေမူကြမ်းသည် မီဒီယာလွတ်လပ်မှုကို ထိန်းချုပ်မည့် ဥပဒေသာဖြစ်ကြောင်း၊ စာနယ်ဇင်းသမားများကို အကာအကွယ်ပေးမည့် ဥပဒေမဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ပြန်ကြားရေးက အခုလို ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနဲ့ ထုတ်ဝေသူများ ဥပဒေကြမ်းကို ထုတ်လိုက်တာဟာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် စာနယ်ဇင်းကောင်စီကို မထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့ သဘောရောက်တယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရော၊ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေရော၊ ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲနေတာရောကို ၀ိရောဓိဖြစ်စေတယ် . . .
မြန်မာဂျာနယ်လစ်သမဂ္ဂ (MJU) ၏ ကြေညာချက်တွင် "ဥပဒေကြမ်းသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေးအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ ပြုလုပ်နေပါသည်ဆိုသော အစိုးရ၏ မူဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်စွာ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်များကို တွေ့မြင်နေရပြီး အထူးသဖြင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းဟန်ပြုပြီး ယခင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ စာပေစိစစ်ရေးဌာနမှ အစဉ်စွဲကိုင်ခဲ့သည့် စည်းကမ်းများကို အခန်း(၃)၊ ပုဒ်မ ၇ တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲလာသည်ကို အထင်အရှား တွေ့မြင်နေရပါသည်" ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ဥပဒေမူကြမ်း၏ အခန်း (၃)၊ ပုဒ်မ ၇ တွင် "ပုံနှိပ်သူ သို့မဟုတ် ထုတ်ဝေသူသည် အောက်ပါအချက် တစ်ရပ်ရပ်တွင် အကျုံးဝင်သော ထုတ်ဝေစာများကို ပုံနှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ဝေခြင်းမပြုရ - (က) တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အချင်းချင်းကိုလည်းကောင်း၊ အခြားဘာသာ သာသနာကိုလည်းကောင်း ထိခိုက်နစ်နာစေမည့် အကြောင်းအရာများ ဖော်ပြခြင်း၊ (ခ) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ပျက်ပြားစေရန်သော် လည်းကောင်း၊ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားစေရန်သော် လည်းကောင်း လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ (ဂ) ညစ်ညမ်းစာများကို ဖော်ပြခြင်း၊ (ဃ) ရာဇ၀တ်မှု၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ လောင်းကစားမှုနှင့် မူယစ်ဆေးဝါးမှုနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းတို့ကို အားပေးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ (င) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် အခြားတည်ဆဲ ဥပဒေများအရ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆန့်ကျင်ဖောက်ဖျက်ရာရောက်သည့် အရေးအသားစာများ ထုတ်ဝေခြင်း" ဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ဤပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် န၀တ၊ နအဖ လက်ထက်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ စာပေစိစစ်ရေးမှ ထုတ်ပြန်ထားသော မူဝါဒဖြစ်ပြီး သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်သော မူဝါဒများဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် အခန်း (၇) ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များတွင်ပါဝင်သော ပုဒ်မများသည်လည်း စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်အဖြစ် ရပ်တည်နေသော သတင်းမီဒီယာ နယ်ပယ်အတွက် ပြင်းထန်လွန်းနေသည်ဟု မြန်မာဂျာနယ်လစ်သမဂ္ဂ၏ ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း (MJA) ကလည်း "ဥပဒေ၏ အခန်း (၁) တွင် မူပိုင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် မပါရှိပါ။ သို့ရာတွင် အခန်း (၂) နှင့် အခန်း (၄) တို့တွင် ဖော်ပြထားချက်များအရ မူပိုင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲသည် ယခင်စာပေစိစစ်ရေးနှင့် များစွာခြားနားမှု မရှိခြင်းကို တွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေနှင့် ၁၉၃၁ ခုနှစ် ပုံနှိပ်တိုက် (အရေးပေါ် အာဏာများ) အက်ဥပဒေတို့ကို အသွင်ပြောင်းထားခြင်း တစ်မျိုးဟု မိမိတို့ရှုမြင်သည်။ သတင်းသမားများအတွက် ပုံနှိပ်နှင့် သတင်းမီဒီယာဥပဒေမှ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခြေခံမူများနှင့် ဖီလာဆန့်ကျင်ဖြစ်နေပြီး ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူတို့ဖက်ကို ပြန်လည်ချုပ်ကိုင်ခြင်းအားဖြင့် သတင်းသမားများ၊ စာရေးဆရာများကို ယခင်ကအတိုင်း ပြန်လည်ချုပ်ကိုင်မည့် အခြေအနေများ တွေ့နေရပါသည်" ဟု ၎င်းတို့၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် "တရားမ၀င် ထုတ်ဝေစာအဖြစ် ကြေညာနိုင်ခြင်း၊ ယင်းအပေါ် လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းနိုင်ခြင်းတို့သည် လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်းဖြစ်ပြီး Pre-Censorship မဟုတ်သော်ငားလည်း Post-Censorship သာ ဖြစ်နေပါသည်။ ယခု ဥပဒေကြမ်းအရ ဆိုပါက ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများနှင့် သတင်းမီဒီယာများသည် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သာ ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်ဟု မိမိတို့ သုံးသပ်သည်" ဟု (MJA) ၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက် (MJN) ကလည်း "သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်သည် မီဒီယာလောကသားများအတွက် သာမက ပြည်သူများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ယင်းဥပဒေကြမ်းသည် ပြည်သူများနှင့် သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ ဆန္ဒသဘောထားကို တောင်းခံရယူခြင်း မရှိဘဲ တစ်ဖက်သတ်ရေးဆွဲခြင်းဟု မှတ်ယူ၍ထိရောက်သော ကန့်ကွက်လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်" ၎င်းတို့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ တိုက်ရိုက်စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်တိုင် သဘောတူညီခဲ့သော ပုံနှိပ်နှင့် သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေရေးဆွဲရန် တာဝန်လွှဲအပ်ခံထားရသည့် သတင်းမီဒီယာကောင်စီက မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် အစည်းအဝေးကျင်းပပြီး အဆိုပါ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း ဥပဒေကြမ်းအား သဘောမတူကြောင်း ကန့်ကွက်လွှာအား နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းရရှိသည်။
"မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ)က နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရယ်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရယ်၊ အဓိကကတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ Mandate နဲ့ ဖွဲ့ထားတာပါ။ ဒါ့အပြင် ပုံနှိပ်နဲ့ထုတ်ဝေသူများ ဥပဒေကြမ်းဆွဲဖို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်ကိုယ်တိုင် ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ပွဲမှာ၊ ပထမဆုံး ပြန်ဖွဲ့တဲ့နေရာမှာ အခြေခံမူဘောင် ပေးထားတယ်။ အဲဒီပေးထားတဲ့အထဲမှာ သတင်းစာထုတ်ဝေတာရော၊ ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေတာရော၊ ပုံနှိပ်သမားရော၊ ထုတ်ဝေသူတွေ အတွက်ရော ရေးဆွဲဖို့အချက်တွေက အဲဒီထဲမှာ ပါပြီးသား။ မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီက ရေးဆွဲနေတဲ့ ပုံနှိပ်နဲ့ထုတ်ဝေသူများ ဥပဒေကြမ်းထဲမှာ အဲဒါပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ ကြားထဲကနေပြီးတော့ ပြန်ကြားရေးက အခုလို ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနဲ့ ထုတ်ဝေသူများ ဥပဒေကြမ်းကို ထုတ်လိုက်တာဟာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် စာနယ်ဇင်းကောင်စီကို မထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့ သဘောရောက်တယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရော၊ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေရော၊ ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲနေတာရောကို ၀ိရောဓိဖြစ်စေတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်စေတယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်တယ်" ဟု မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) ၏ အတွင်းရေးမှူး ကိုကျော်မင်းဆွေက ပြောပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး "မီဒီယာလောကသားအားလုံး ကန့်ကွက်သူမရှိဘဲ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) ကို မထီမဲ့မြင်လုပ်ခြင်းဟာ မီဒီယာလောကသား အားလုံးကို မထီမဲ့မြင်လုပ်ခြင်းနဲ့ အလားသဏ္ဌာန် တူတယ်။ ဒီမိုကရေစီသွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကိုလည်း အဟန့်အတား ဖြစ်တဲ့သဘော သက်ရောက်တယ်။ သမ္မတကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် Stakeholder အသီးသီးသွားနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း၊ အဲဒီလိုသွားနေလို့ နိုင်ငံတကာက ချီးကျူးထောပနာပြုနေတဲ့၊ မျက်နှာပွင့်နေတဲ့ မျက်နှာတွေကို အိုးမဲသုတ်တဲ့သဘော သက်ရောက်တယ်" ဟု ၎င်းက ပြောပါသည်။
ဥပဒေကြမ်းသည် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေးအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ ပြုလုပ်နေပါသည်ဆိုသော အစိုးရ၏မူဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်စွာ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်များကို တွေ့မြင်နေရပြီး အထူးသဖြင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ပုံနှိပ်သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းဟန်ပြုပြီး ယခင်ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ စာပေစိစစ်ရေးဌာနမှအစဉ် စွဲကိုင်ခဲ့သည့် စည်းကမ်းများကို အခန်း (၃)၊ ပုဒ်မ ၇ တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲလာသည်ကို အထင်အရှား တွေ့ မြင်နေရ . . .
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းဥပဒေကြမ်းအား မီဒီယာလောကသားများကို အသိမပေးဘဲ တစ်ဖက်သတ် ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းမှာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးလိုခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ရေးဆွဲထားသော ဥပဒေကြမ်း၏ အခန်း (၈) ပုဒ်မ ၂၇ တွင် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် (က) ၀န်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ (ခ) ၀န်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်" ဟု ထည့်သွင်းထားခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတင်းမီဒီယာနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းအားလုံးကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ချုပ်ကိုင်မည်ဆိုခြင်းအား ပြသသော သဘောပင်ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်ထောက်ပြကြသည်။
"နိုင်ငံသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ရော မီဒီယာအသိုင်းအ၀ိုင်းက အနေနဲ့ပါ ဒီပုံနှိပ်နဲ့ ထုတ်ဝေရေးမူကြမ်းကို သဘောမတူကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသသွားမှာပါ။ ဥပဒေစည်းကမ်း ဘောင်တွေနဲ့ ဥပဒေကြောင်းအရလည်း ကန့်ကွက်သွားဖို့ လိုအပ်တယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ဒီလိုမျိုးသဘောမတူကြောင်း အချက်အလက်တွေ၊ သတင်းတွေပေးပို့ပြီး ကန့်ကွက်လို့ရသလို မီဒီယာလောကသားအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းပြီးတော့ သဘောမတူကြောင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးပြီး လုပ်ပါမယ်။ လုပ်တဲ့အခါမှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘဲ အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီး လုပ်ဆောင်မှသာလျှင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားခွင့်ကို ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဇော်သက်ထွေး (MJU) ကလည်း ပြောကြားပါသည်။
အဆိုပါ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းဥပဒေကြမ်းအား လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့လာပါက ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က ဆိုသည်။
"ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်ကို ပို့လာတဲ့အခါမှာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်းရယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အချက်တွေကို ထောက်ပြဆွေးနွေးဖို့ ရှိပါတယ်။ မီဒီယာတွေရဲ့ ဝေဖန်ခွင့်ကို ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ဥပဒေပါအချက်တွေနဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်/ထုတ်ဝေ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ ထပ်တူဖြစ်နေတဲ့ အချက်တွေကို လွှတ်တော်မှာ တင်ပြဆွေးနွေးဖို့ စတင်ရှာဖွေနေပါတယ်" ဟု ပြောကြားပါသည်။
၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ကမူ "ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် စည်းကမ်းချက်တွေထဲမှာပါတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့ တခြားတည်ဆဲဥပဒေများအရ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆန့်ကျင်ဖောက်ဖျက်တဲ့ အရေးအသားများ ထုတ်ဝေခြင်းမပြုရလို့ပါတဲ့ အချက်ကိုတော့ နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေမှာ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေ အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင် လက်မခံနိုင်တဲ့ အချက်တွေ ပါနေပါတယ်။
အဲဒီအချက်တွေကို ပြုပြင်ဖို့လိုကြောင်း ပြည်သူက တောင်းဆိုလာရင် အဲဒီတောင်းဆိုတဲ့ သတင်းတွေကိုရော မီဒီယာတွေက မရေးရဘူးလား။ ရေးရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီး အရေးယူမှာလား။ နောက်တည်ဆဲ ဥပဒေတွေမှာလည်း လက်မခံနိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို သတင်းစာတွေမှာရေးရင် သတင်းစာတွေကို ပိတ်ပစ်မှာလား။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ သဘောဆိုရင်တော့ အဲဒီအချက်ကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး" ဟု ဝေဖန်လိုက်သည်။
"မီဒီယာထက် စာမျက်နှာထက်မှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြမှု ရေးသားမှုတစ်ခုခုကြောင့် ရေးသားခံရတဲ့သူ နစ်နာတယ်ဆိုရင် တရားမကြောင်းအရရော ပြစ်မှုကြောင်းအရပါ အရေးယူတရားစွဲရမယ်လို့ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ မဟုတ်တာရေးရင် မဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူ ဖြေရှင်းရမျှာပါ့။ တည်ဆဲဥပဒေအရ အတိအလင်း ပြဋ္ဌာန်းပြီးသား ဥပဒေရှိရက်နဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဥပဒေတွေထုတ်ပြီး စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ချုပ်ကိုင်နေချင်တာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ဒီလို မီဒီယာကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ဥပဒေမျိုးတွေက ဒီမိုကရေစီလို့ ကြေညာထားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လုံးဝမရှိပါဘူး" ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကွန်ရက်မှ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးစိုးတင့်ရီက ပြောသည်။
"လွတ်လပ်စွာ ရေးသားဖော်ပြခွင့်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဥပဒေကြမ်းပဲ ဖြစ်တယ်။ မလိုအပ်ဘဲ ဒီဥပဒေကြမ်းကို ဘာလို့ထုတ်တာလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ နားလည်တယ်။ ဒါကြောင့် ကန့်ကွက်ရတာပါ။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းလို့သာ ရေးထားပေမယ့် ဒီအထဲမှာ Website တွေ၊ အေဂျင်စီတွေရယ် သတင်းဌာနတွေရော အားလုံးပါနေတယ်။ အဲဒါတွေက တကယ်တော့ သဘာဝမကျပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က မှတ်ပုံတင်တဲ့နေရာမှာ လုပ်ငန်းအနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ၆၂ ဥပဒေမျိုးနဲ့ သိပ်မကွာတဲ့ ဖော်ပြချက်မျိုးနဲ့ စာစောင်တစ်စောင်ချင်းသော် လည်းကောင်း၊ သတင်းဌာန တစ်ခုချင်းသော် လည်းကောင်း မှတ်ပုံတင်တယ်ဆိုတာ ပြောသွားတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မကိုက်ညီဘူး။ သက်တမ်းတွေကို သတ်မှတ်ထားတာကလည်း သဘာဝမကျပါဘူး" ဟု မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက်၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးမြင့်ကျော်က ဆိုသည်။
"ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး အကူးအပြောင်းမှာ စာနယ်ဇင်းလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် Media Law ရေးဆွဲဖို့ ပူးပေါင်းပါလို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အတွက် စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) မှာ ပါဝင်ခဲ့တာပါ။ အခုလိုမျိုး စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) တောင် မသိရဘဲ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ ဥပဒေကြမ်းကို ရုတ်တရက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဟာ ရိုးသားမှု မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကြမ်းထဲမှာ အရင်စာပေစိစစ်ရေး လက်ထက်က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ၊ ဥပဒေတွေ ပါဝင်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဒီလိုလုပ်ရပ်ကြောင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအပေါ်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှု ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်" ဦးဇော်သက်ထွေးက ပြောပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့အားလုံးနှင့် ဂျာနယ်လစ်များက တစ်ဖက်သတ်ရေးဆွဲထားသည့် ဥပဒေမူကြမ်းအပေါ် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေသော်လည်း အချို့သော ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများကမူ ဥပဒေမူကြမ်းကို လက်ခံနိုင်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအား တွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
"ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ အရင်ကလို Proxy Journalist တွေကို လူထုက လက်မခံတဲ့အခါ သူတို့နဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် ပေါင်းစားခဲ့တဲ့ ခရိုနီထုတ်ဝေသူ တချို့ကို အသုံးချပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး ဥပဒေကို အသက်သွင်းဖို့ လက်ကိုင်တုတ် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကြိုတင်လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီး ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို ကြေငြာခဲ့တယ်" ဟု အမည်မဖော်လိုသူ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
"နေပြည်တော်ကို ဒီဥပဒေ မထွက်ခင် တစ်ပတ်က ခေါ်ပြီး ကြိုတင်ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိတယ်။ အခုလည်း စာနယ်ဇင်းကောင်စီရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးဖို့ ကြံစည်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်" ဟု အဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်က ဆိုပါသည်။
"ဒီအဖွဲ့က ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ အားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူပါပဲ။ သူတို့က အခွင့်အရေးသမား သက်သက်ပါ။ ကိုယ့်မီဒီယာလောကကို မကာကွယ်ဘဲ အခုလိုမျိုးတွေ လုပ်ရင် ဒီလောကက သူတို့ကို ၀ိုင်းပယ်ကြပါလိမ့်မယ်" ဟု Eleven Media Group ၏ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာသိန်းမြင့်က ဆိုပါသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွင့်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အဆိုပါအချက်ကို ထိန်းချုပ်မည်ဆိုပါက နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ပြောဆိုနေသော သန့်ရှင်းသော အစိုးရ၊ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး ရှိလာနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဂျာနယ်လစ်များက ဆိုပါသည်။
"အခု ပုံနှိပ်ဥပဒေမူကြမ်းမှာ စာနယ်ဇင်းတွေမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုကို ထိပါးစေတဲ့ အချက်တွေ ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု မရှိရင် ဒီမိုကရေစီဆီကို သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းက ဖြောင့်ဖြူးမှာ မဟုတ်ဘူး။ သမ္မတကြီး အမြဲပြောနေတဲ့ သန့်ရှင်းသောအစိုးရ၊ ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု မရှိဘဲ သန့်ရှင်းတဲ့အစိုးရ၊ ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေး ရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ သမ္မတကြီးရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ ပြောပြောနေတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆိုတာမှာလည်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု မရှိဘဲ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဂတိတရားလိုက်စားတာ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု စတဲ့စတဲ့ အချက်တွေကို စာနယ်ဇင်းက ဖော်ထုတ်မှ ဒီလာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စတွေ လျော့နည်းလာမယ်။ စာနယ်ဇင်းတွေက ချမပြဘဲ စာနယ်ဇင်းတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် မရှိအောင် ထိန်းချုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ဒီအဂတိတရား လိုက်စားမှုတွေက ရှိနေဦးမှာပဲ။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် မရှိရင် နိုင်ငံကလည်း ဘယ်တော့မှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး" ဟု The Messenger သတင်းဂျာနယ်၏ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုသူရအောင်က ပြောပါသည်။
ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုက "ဥပဒေကြမ်းမှာ ထုတ်ဝေခွင့်လျှောက်ထားပြီး ဘယ်ကာလအကြာမှာ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာ မပါဘူး။ အခကြေးငွေ ဘယ်လောက်ပေးသွင်းရမယ် ဆိုတာလည်း မပါဘူး။ ဒါတွေ တိတိကျကျဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုတာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဝေဖန်တာတွေ ပါသလား။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ အမြဲတမ်း မမှန်နိုင်ဘူး။ အဲဒါကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ တင်ပြရာကနေ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကို ထိခိုက်လာနိုင်တာတွေ ရှိနိုင်တယ်။ တည်ဆဲဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်တဲ့ သဘောမျိုးလည်း ပါလာနိုင်တယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ကို ဘောင်ကျဉ်းသွားစေတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
( Narinjara News )
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် နိုင်ငံရေး အခြေအနေ ရှုပ်ထွေးနေပြီး နေရာ အနှံ့အပြားတွင် ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူများ ပေါ်ပေါက်နေသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် နယ်စပ်ကို အထူး သတိထား စောင့်ကြပ်ရန် လိုအပ်နေကြောင်း နယ်စပ်နေ ဒေသခံများက ပြောဆိုသည်။
ယခုအခါ မြန်မာ နယ်စပ်ဘက်သို့ အမည်မသိသူ လက်နက်ကိုင်များ ချဉ်းကပ် ၀င်ရောက်မူများ ရှိနေပြီ လူနည်းစု ကျေးရွာများကို ဓါးပြတိုက်မူများလည်း ရှိနေကြောင်း နတ်ကျောက်ဆရီမြို့နယ် အပိုင် ဗျိုင်းမတောက် ရွာသား တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ နယ်စပ်က ကင်ဘိချောင်းဝမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ရခိုင်အိမ်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့ ညဉ့်မှာ ၀င်ရောက် ဓါးပြတိုက်သွားတယ်။ အိမ်တစ်အိမ် ငွေ ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ အဲသလိုမျိုးယူသွားတယ်။ အိုးခွက် ပုဂံတွေလည်းကို အကုန်လုံး လုယူသွားခဲ့ပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဓါးပြတိုက်ခံရသော ရွာမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ဘက်ခြမ်း နယ်စပ်တွင် တည်ရှိပြီး သစ်ခုတ် ၀ါးခုတ် စုဖွဲ့ နေထိုင်ကြသော ရွာစု တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ အိမ်က ခုနှစ်ဆောင်၊ ရှစ်ဆောင်လောက်ဘဲ ရှိပါတယ်။ ရွာမှာက လူ ၃၀ လောက်ဘဲ ရှိပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီကနေ လူနေအိမ်ခြေများတဲ့ နေရာတွေကို ထွက်ပြေးလာကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေတယ်။ တချို့လည်း ၀မ်းရေး အတွက် ဆက်နေကြရတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းက နယ်စပ်မှာ ကြောက်နေကြရပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဓါးပြအဖွဲ့တွင် လူပေါင်း ၁၁ ဦးခန့် ပါဝင်ပြီး ဘင်္ဂလီစကားပြောကာ လုပ်သေနတ်များကို ကိုင်ဆောင် ထားကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ဓါးပြများ ရိုက်နှက်မူကြောင့် ပိုးမောင်ဆိုသူ အမျိုးသား တစ်ဦးတွင် အနည်းငယ် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဓါးပြတိုက်မူသည် ဂျာမတ် အစ္စလာမ်မီယာ ဒုဥက္ကဌ ဒေလ၀ါ ဟူစိန် ဆာယီဒီအား သေဒဏ် စီရင် ချက်မှတ် ခံရသည့်နေ့ ညဥ့်ဦးပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းပြင် ယမန့်နေ့ ညဉ့်ကလည်း မြန်မာနယ်စပ် အနီး နတ်ကျောက်ဆရီမြို့နယ် ဘိုင်ဆရီ ချောင်းဖျားရှိ ရော်ဘာခင်း တစ်ခုသို့ အမည်မသိသူ လက်နက်ကိုင် တစ်စု ၀င်ရောက်လာခဲ့သဖြင့် ရော်ဘာခင်း မန်နေဂျာက နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းကို အကူအညီ တောင်းခဲ့ရသည်ဟု ရော်ဘာခင်းတွင် လုပ်ကိုင်နေသူ ငရက်ချေ ကျေးရွာမှ ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုအခါ သက်ဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အာဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက် ဆူပူမူတွင် ပါဝင်သူများကို လိုက်လံ ဖမ်းဆီးနေရာ စစ်တကောင်း ဒေသဘက်မှ အဖမ်း မခံလိုသူများသည် မြန်မာ နယ်စပ် အနီးသို့ တောနက်များထဲသို့ ရှောင်တိမ်း နေကြသည်ဟု သိရသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆူပူမူကြောင့် သေဆုံးသူ ၄၀ ကျော် ရှိသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာ ရသူမှာလည်း ၃၀၀ ကျော်သွားခဲ့ပြီဟု သိရသည်။
ပင်လုံစာချုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြုလုပ်တဲ့ အမြင်သဘောထား ဆွေးနွေးပွဲ - မတ်လ ၂ ရက်နေ့ ၂၀၁၃
ဦးချန်ထွန်းရဲ့ တစ်ပြည်ထောင်စနစ် တည်ထောင်လိုက်ခြင်းကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေ
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ချင်းတိုင်းရင်းသားများ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ တက္ကသိုလ်များ ရန်ကုန် နာယက
ဒေါက်တာ ဒေါ်အေးအေးငွန်က မတ်လ ၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ် ဓမ္မစေတီလမ်းနဲ့ ဦးဝိစာရလမ်းထောင့်ရှိ ဆမွန်စီးပွားရေး
စင်တာ တတိယထပ်မှ ဖွံ့ဖြိုးရေး မဏ္ဍိုင်အစည်းအဝေးရုံးခန်းမှာ ပင်လုံစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြုလုပ်တဲ့ အမြင်သဘောထား
ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါကြောင့် စိတ်ဝမ်းကွဲနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဟာ ပင်လုံစိတ်ဓါတ်ကို
အခြေခံတဲ့ ပင်လုံညီလာခံလိုမျိုး နောက်တစ်ကြိမ်း ပြုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့အပေါ်မှာလက်ရှိအစိုးရရော
တိုင်းရင်းသားတွေဖက်ကပါ နားလည်မှုတွေ ထားရှိဖို့သူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲ ဒီပွဲကို တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့
သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဦးစိုင်းအောင်ထွန်းကလဲ ပင်လုံစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံရေး
ပါတီတွေရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲကို သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဦးစိုင်းအောင်ထွန်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကျမ်းစာကျောင်းမှကိုယ်စားလှယ် ကိုမောင်ဆန်းအောင် ၊
ချင်းတိုင်းရင်းသားများ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ တက္ကသိုလ်များ ရန်ကုန် နာယက ဒေါက်တာ
ဒေါ်အေးအေးငွန် နဲ့မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကြောင်းလေ့လာနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ နောက် သံဃာတော်တွေ
တိုင်းရင်းသားတွေ စိတ်ပါဝင်စားသူတွေအပါအဝင် လူဦးရေ ၁၀၀ လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။့
စိုင်းနော်ခမ်း ဖမ်းမိတဲ့ နောက်ပိုင်း မူးယစ်ဆေး ဈေးကွက် ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားလား။
သား ဆန်ခမ်း၊ နိုင်ငံမဲ့ ရီလိုင် ဆိုသူနှင့် လာအိုနိုင်ငံသား ကျာရှီကာဆိုသူတိုကို မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် တရုတ်အစိုးရမှ ဆေးထိုး ကွပ်မျက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြီး ဖြစ်သည်။
ဘီဘီစီ သတင်းအရ သူတို့ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို တရုတ်အစိုးရ နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ်ပေးမည် ဆိုသော်လည်း စိုင်းနော်ခမ်း ညီမ ဖြစ်သူ ပြောတာက ဖမ်းဆီးထားကတည်းက တွေ့ခွင့်မရကြောင်း တွေ့ဖို့ ကြိုးသားသူ မိသားစုဝင် တစ်ယောက်ကိုလဲ ၁၅ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။
အဓိကစွပ်စွဲချက် ကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ မဲခေါင်မြစ်ပေါ်က တရုတ် သင်္ဘောသား ၁၃ ရောက်ကို သတ်လိုက်သော ပြစ်မှု အပြင် ဘိန်းမှောင်ခိုမှု ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်သင်္ဘောသားများကို သတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်း စစ်သားများ ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်သားများကိုယ်တိုင် ၀န်ခံထွက်ဆိုပြီး တောင်းပန်ထားကြောင်း ထိုင်းသတင်းတခုမှာ ဖတ်မိပါတယ်။ စိုင်းနော်ခမ်းကတော့ တရုတ်တရားရုံး က စစ်ဆေးရေးကာလ တလျှောက်လုံး မ၀န်ခံ ခဲ့ပါဘူး။ အမှန်ဆိုရင် ထိုင်း စစ်တပ်ရဲ့ ဥပဒေအရ မဲခေါင်ဒေသက မူးယစ်မှောင်ခိုသမားများကို အမြစ်ပြတ် ချေမုန်းရေး ရဲ့ တစိတ်တဒေသ အနေနဲ့ အဆိုပါ တရုတ် မူးယစ်မှောင်ခို သမားများကို ချေမုန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ဟန်တူသည်။ (၀န်ကြီးချုပ်သက်ဆင် လက်ထက်က ထုတ်ခဲ့သော မူးယစ်ဂိုဏ်းပစ်မိန့် ဥပဒေ အခုထိ တည်ဆဲ ဖြစ်သည်။ ထိုင်း နယ်စပ် တလျှောက်မှာ ထိုင်း နိုင်ငံသားများ အများအပြားလဲ ထိုင်း နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ လမ်းပေါ်မှာတင် ပစ်သတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်။)
နောက်ပြီး စိုင်းနော်ခမ်းဟာ မဲခေါင်းမြစ်ဝှမ်းတလျှောက် ဒေသခံများကို ဗိုလ်ကျနေတဲ့ တရုတ်မှောင်ခို သမားများကို ပြတ်ပြတ်သားသား ကိုင်သွယ်သူ အဖြစ်လဲ နာမည်ကြီးပါတယ်။ (တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ မှောင်ခိုလုပ်ရတာဟာ အင်မတန်မှ အန္တရယ်များပါတယ်။ ကချင်လူမျိုးတွေ ခဏဏခံရဘူးတယ်။ သစ်မှောင်ခို၊ ကျောက်မှောင်ခို လောကမှာ တရုတ်တွေဟာ ပစ္စည်းယူသွားပြီး ငွေကို တော်တော်ကြာတဲ့အထိ မနဲမနဲ တောင်းယူရတဲ့ အပြင် သူတို့ ပိုင်နက်ထဲရောက်ရင် မျက်နှာချိုးတမျိုးပြောင်းတတ်တယ် လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ တချို့ကို အစဖျောက်လိုက်တာတွေရှိဖူးတယ်။ ပိုက်ဆံရှင်းတယ် ဆိုရင်တောင်မှ တစ်နှစ်လောက်အချိန်ဆွဲထားတတ်ပါတယ်။ သူတို့တခုခု ပြန်လိုချင်တဲ့အခါမှသာ မျက်နှာချိုသွေးပြီး အရင်အကြွေးရှင်းတတ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ မှောင်ခို လုပ်ငန်းဆိုတော့လဲ ဘယ်မှာမှ တိုင်လို့မရ။)
ကိုလိုနီခေတ် တိုင်းရင်းသားများ အခြေအနေ
မတ် ၁၂၊ ၂၀၁၂။ မော်လမြိုင်မြို့ မွန်ဓမ္မာရုံ၌ ပြုလုပ်သည့် အသက် ၉၀ ပြည့်အကြို
ဂုဏ်ပြုပွဲတွင် မြင်တွေ့ရသည့် မွန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ဥက္ကဌ နိုင်ငွေသိမ်း
(Photo - Otjah/ Kaowao)
ကိုလိုနီခေတ် တိုင်းရင်းသားများ အခြေအနေ (၁) - နိုင်ငွေသိမ်း
by Aung Zaw Bo on Sunday, March 3, 2013 at 3:37am ·
အပိုင်း ၁. ဇယားဒေသများ
၁၉၃၅-ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ (စီရင်အုပ်ချုပ်မှု) ဥပဒေဒုတိယဇယားတွင် အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဖြင့်အုပ်ချုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ဒေသများကို စာရင်းပြုထားသည်။ အပိုင်း(၁) ဇယားဝင်ဒေသများမှာ ပဒေသရာဇ်ရှမ်းပြည်၊ ပဒေသရာဇ်ရှမ်းပြည်တွင်မပါဝင်သော ရှမ်းပြည်နယ်များဖြစ်ကြသည့် သောင်သွတ်၊ ချင်ကလိန်း၊ ခန္တီးနှင့် ရခိုင်တောင် တန်းဒေသများ၊ ချင်းတောင်စီရင်စု၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်နှင့်ကသာစီရင်စုတွင်ပါဝင်သော ကချင် တောင်တန်းဒေသ များ၊ တြိဂံနယ်မြေဟုတွင်သောဒေသ၊ အထက်ချင်းတွင်းစီရင်စုမှ မြောက်ဘက်တွင် ရှိသည့် ဟူးကောင်းဒေသဟုတွင် သောဒေသ၊ သံလွင်စီရင်စုနှင့် ဒေသအားလုံးပါဝင်သည်။
အပိုင်း(၂)တွင် မပါဝင်သည့် မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်တို့မှ အစိတ်အပိုင်းများ၊ အထက်ချင်းတွင်းစီရင်စုရှိ ဟုမ္မလင်း ဆပ်ဒီဗီဇံ၊ ယခင်တမူးမြို့နယ်မှ ကျေးလက်ဒေသများ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် မှ မြဝတီ တိုက်နယ်၊ တောင်ငူစီရင်စုအေ့ရှဘက်ခြမ်းနှင့် သထုံစီရင်စုရှိတောင်တန်းဒေသများပါဝင်သည်။ အမှတ် (၂) ဒေသ မှာ
ဘုရင်ခံအားစိတ်ကြိုက် ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ခွင့်ပြုထားသည့် ဒေသများဖြစ်ကြသည်။
သို့ရာတွင်အဆိုပါဒေသများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်ညှိနှိုင်းကာ ပြင်ဆင်ထားမှုတချို့ရှိသည်။ သာဓက အားဖြင့် ယခင်က အပိုင်း(၂) အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော သံလွင်စီရင်စုကို အပိုင်း(၁) ဒေသဖြင့်ပြုလုပ်လိုက်သည်။
တောင်တန်းဒေသများနှင့် ပြည်မခွဲထားခြင်းကို တို့ဗမာအစည်းအရုံးက မကျေနပ်သဖြင့် အောက်ပါ ဆုံးဖြတ် ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့သည်။ (တို့ဗမာအစည်းအရုံးက မြန်မာ၊ မွန်၊ ရခိုင်နှင့် ချင်းတောင်တန်းသားများ အားလုံးကို ဗမာဟုသတ်မှတ်သည်။- စာရေးသူ)
၁၉၃၈-ခုနှစ်တွင် တို့ဗမာအစည်းအရုံးက မော်လမြိုင်ညီလာခံ၌ ဇယားဝင်တောင်တန်းဒေသများအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဆိုတင်သွင်းရာတွင်-
(၁) “တို့ဗမာအစည်းအရုံးကြီးသည် ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်စသော ဗမာပြည် တိုင်းရင်းသားအားလုံး တို့ကို တသွေးတစိတ်တည်း တို့ဗမာဟုအသိအမှတ်ပြုထားရာ ဗြိတိသျှဓနရှင်တို့က လွတ်လပ်စွာသွေးစုပ်ခွင့် ရနိုင်ရန် အတွက်၎င်း၊ အုပ်ချုပ်ရာ၌ လွယ်ကူစေရန်၎င်း၊ ဤကဲ့သို့ တို့ဗမာအချင်းချင်း သွေးခွဲထားခြင်းတို့ကို တို့ဗမာအစည်း အရုံးကြီး လုံးဝမနှစ်မြို့ကြောင်း ထိုမှတပါး ချွင်းချန်ထားသောနယ်များရှိ တို့ဗမာများနှင့် အုပ်ချုပ် ရေးရနေသော တို့ဗမာများအား စိတ်ဝမ်းကွဲပြားစေရန်အတွက် စီမံထားသောစနစ်ကို ဖျက်ဆီးလိုသဖြင့် သွေးစည်းရန်သွားရောက် နေထိုင်ကြသူ သွေးစည်းနေသူများအား အကြောင်းမဲ့သက်သက် နယ်ခြားဥပေဒေများ နှင့် နှင်ထုတ်ပစ်နေကြာင်း အုပ်ချုပ်ရေးအရ သွေးခွဲထားရုံမကပဲ ဥပဒေပုဒ်မတို့ဖြင့် ထပ်မံသွေးခွဲနေခြင်းကိုမူ ငါတို့အထူး မနှစ်မြို့နိုင်ပေကြောင်း။
“တို့ဗမာအစည်းအရုံးကြီးရှေးရှုအပ်သော ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းစခန်းသည် မြေညီ တို့ဗမာနှင့်သာမက တောင်တန်း ဒေသရှိ တို့ဗမာများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပေရာ မည်ကဲ့သို့ အနှောင့်အယှက်အချုပ်အချယ် များစေကာမူ တောင်ကုန်း ဒေသများရှိ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ စသောတို့ဗမာများနှင့် မြေညီရှိ တို့ဗမာများ သွေးစည်းမှုကို အပတ်တကုတ် ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း” ဟူကာ တောင်တန်းနေတိုင်းရင်းသားအရေးနှင့်ပတ်သက် ပြီး မြန်မာတို့အရေးယူစိတ်ဝင်စားပုံကို ထည့်သွင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။
(၂) ၁၉၄၅-ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၉)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကျင်းပသော နေသူရိန်အစည်းအဝေးကြီးတွင်
တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရပ်လုံးနှင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည် ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်နှင့်ပူးပေါင်းပြီး လွတ်လပ် ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို စည်းလုံးညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်ရန်အဆိုကိုလည်း တင်သွင်းခဲ့ သည်။
(၃) ၁၉၄၆-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၇) ရက် ကြာသပတေးနေ့မှ (၂၃) ရက် ဗုဒ္ဖဟူးနေ့အထိ ရွေတိဂုံ စေတီတော် အလယ်ပစ္စယံ၌ ပထမအကြိမ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဖဆပလညီလာခံကြီးကိုကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပေါင်း (၁၈) ခု တင်သွင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကြီးတွင် ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုတင်သွင်းသည့် အဆိုအမှတ် (၆) သည် “တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုအရေး” ဖြစ်သည်။ ၎င်းအဆိုကိုပုသိမ်မှ ဦးမြစိန်၊ ဖျာပုံမှ ဦးလှဆွေနှင့် မွန်ဖိုးချိုတို့ကထောက်ခံကြသည်။ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို ရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင်- “တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနှင့် ဗမာအမျိုးသားအများစုတို့ကို တကယ်ပင်ရင်းနှီးရေးအတွက် အောက်ပါအချက် တို့ကိုကွန်ကရက်ကြီးကအသိအမှတ်ပြုကြောင်း။
(၂) ယဉ်ကျေးမှုတွင် လွတ်လပ်မှုရှိရမည်။
(၃) စီးပွားရေးတွင်အခွင့်အရေးတူညီရမည်။ (ညီတူညီမျှအောင်လည်း ကြိုးစားရမည်)
(၄) ဗမာနိုင်ငံအသင်းကိုတည်ထောင်ရာ၌ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလူမျိုးတိုင်းက အားလုံးသဘောတူ လွတ်လပ် စွာ တည်ထောင်ရမည်။ ဤသို့တည်ထောင်ရာတွင်လည်း မိမိကြမ္မာ မိမိဘာသာဖန်တီးနိုင်ခွင့်ကိုလည်း လူမျိုးတိုင်းအားပေးရမည်” ဟုလည်းကောင်း၊ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ –
“လွတ်လပ်သောဗမာပြည်သစ်ကိုတည်ထောင်ရာမှာ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုလူများစုအားလုံး သဘော တူတဲ့ နည်းနဲ့ လွတ်လပ်စွာတည်ထောင်ရန် ကျနော်တို့ကသဘောတူကြောင်းကတိပေးပါသည်။ မည်သည့် တိုင်းရင်း သားလူနည်းစုမဆို မိမိကြမ္မာကိုမိမိဖန်တီးခွင့်ပေးပါမည်။ ကျနော်တို့နှင့်ခွဲလိုသောအခါ ခွဲခွင့်ပြုကြောင်း ကတိပြု ထားပါ သည်။ လူမှန်လျှင်အခွင့်အရေးတူရှိရမည်ကို သဘောပေါက်ပြီးသော ၄၆-ခုနှစ် မြန်မာတို့အပေါ်၌လူနည်းစု ကိုချုပ် ချယ်လိမ့်မည်ဟု သံသယရှိဖွယ်မဟုတ်တော့ပါ” ဟူ၍လည်းကောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ညီလာခံတွင် ဦးဖေခင်တင်သွင်းသော အဆိုအမှတ် (၇)အရ “နယ်ခြားဒေသများအား ဗမာပြည်မနှင့် ပူးပေါင်းရေး”အဆိုမှာ –
(၁) စက္ကူဖြူစာတန်းအရ ရှမ်းပြည် ချင်းတောင်တန်းနှင့် ကချင်တောင်တန်းဒေသ စသောနယ်များကို ဗမာ နိုင်ငံမှခွဲထုတ်ထားခြင်းကို ဤညီလာခံမှကန့်ကွက်ကြောင်း။
(၂) ၎င်းဒေသမှ နယ်သူနယ်သားများသည် ၎င်းတို့၏ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်နိုင်ရန် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်နှင့် ဟောပြောစည်းရုံးခွင့်ပေးရန်။
(၃) ချုပ်ချယ်ထားသော ဥပဒေများကိုပယ်ဖျက်၍ ဗမာတို့နှင့်လွတ်လပ်စွာ ကူးလူးဆက်ဆံခွင့် ပေးရန်
(၄) ဗမာတို့နှင့် ခွဲရေးတွဲရေးကို ဗြိတိသျှတို့က မဆုံးဖြတ်ဘဲ ဗမာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်အချင်းချင်းသာ လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရန်။
ထိုအဆိုများကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ဗမာနှင့်အခြားသောတိုင်းရင်းသားအများ ပူးပေါင်း၍ လွတ်လပ်ရေး အရယူ မည်။ လွတ်လပ်ရေးရလျှင် မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ဆက်လက်နေထိုင်သွားမည်ကို အချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွား မည် ဆိုသည့် တူညီသောရည်ရွယ်ချက်ကိုတွေ့ရ၏။
တောင်တန်းသားများအပါ် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ သဘောထား
၁၉၄၇-ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းပါ အပိုင်း-၁၆၁-ကိုဆွေးနွေးရာ၌ အပိုင်း-၁၆၁-တွင် “သက်ဆိုင် ရာပြည်နယ်သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်သောနေ့မှစ၍ ဆယ်နှစ်အတွင်းတွင် ခွဲထွက်နိုင်သော အခွင့်အရေးကိုမသုံးစွဲရ” ဟုပါရှိသည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သခင်သန်းဖေ (ကွန်မြူနစ်အမတ်) က…”နိုင်ငံအသီးသီးက သူတို့အလိုလျှောက်ပေါင်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ Voluntary Union ခွဲထွက်ချင်တဲ့အခါ ခွဲထွက် နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မူက ကျနော်တို့အဖို့ဆိုရင် အကောင်းဆုံးလို့ယူဆပါတယ်။ ဒီတော့ဒီမူမှာ ကျနော်တို့ ပြန်ကြည့်လိုက် မယ်ဆိုရင် သည်အချက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး လူနည်းစုအခွင့်အရေးတွေကိုအချုပ်အချယ်လုပ်သလို ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် တို့ထင်မြင်မိပါတယ်။”
ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့သမားသည် မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်ပွဲ ၃ ကြိမ်တိုက်ခိုက်ပြီး ၁၈၈၆-ခုနှစ်တွင် မြန်မာဘုရင် သီပေါ ကိုဖမ်းဆီးကာ ၁၈၈၆-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ဗြိတိသျှကိုလိုနီအဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်တခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်သို့ အိန္ဒိယပြည်နယ် အတိုင်း အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၅-ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို အိန္ဒိယမှခွဲလိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ၁၉၃၅-ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အက်ဥပဒေအရ တောင်တန်းဒေသနယ်ခံ (၁) နှင့် (၂) ဟုခွဲထားပြီး ပြည်မနှင့်ခွဲကာ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ထားရှိသည်။ အောက်လွှတ်တော်( House of Representative) နှင့်ဆီးနိတ် ခေါ် အထက်လွှတ်တော်တို့ဖြစ်သည်။ အထက်လွှတ်တော်တွင် အမတ်(၁၈) ဦးကို အောက်လွှတ်တော်အများအထဲမှ အချိုးကျကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်သည့်စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရပြီး (၁၈) ဦးကို ဘုရင်ခံက ၄င်း၏သဘောကျခန့်အပ်နိုင်သည်။ (စုစုပေါင်း ၃၆ ဦး) အောက်လွှတ်တော်တွင် အမတ် (၁၃၂) ရှိရာ အထွေထွေ မဲဆန္ဒနယ်များမှ (၉၁)ဦး၊ လူမျိုးအလိုက်မဲဆန္ဒနယ်မှ (၂၅)ဦး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအလုပ်သမား များနှင့် တက္ကသိုလ်ကိုကိုယ်စားပြုသော အထူးမဲဆန္ဒနယ်များမှ (၁၆)ဦး သတ်မှတ်ထားသည်။
*မှတ်ချက်- လူမျိုးအလိုက်ကိုယ်စားလှယ်(၂၅)နေရာအနက် အိန္ဒိယလူမျိုးများအတွက် (၈) နေရာ၊ ဥရောပ တိုက်သားများအတွက် (၃) နေရာ၊ အင်္ဂလိပ်မြန်မာကပြားများအတွက် (၂)နေရာ၊ ကရင်လူမျိုးများအတွက် (၁၂) နေရာသတ်မှတ်ထားသည်။
၁၉၄၇-ခုနှစ်တွင် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘုရင်ခံ၏အတိုင်ပင်ခံကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း တို့၏သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည့် (၁) နိုင်ငံရေးတန်းတူညီမျှမှု၊ (၂) ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ (၃) ခွဲထွက် လိုက ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့် စသောအင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်သည့် ပြည်ထောင်စုတခုတည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု အခြေခံသော သဘောတူညီချက်တို့ကို ရရှိကြသည်ဖြစ်၍ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကိုအတူတကွယူကြမည်ဟူ သည့် သဘောတူချက်ကို ၁၉၄၇-ဖေဖော်ဝါရီ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ပင်လုံတွင်ရေးထိုးခဲ့သည့်စာချုပ်ကို ‘ပင်လုံစာချုပ်’ ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၄င်းစာချုပ်သည် စာဖြင့်ရေးထားသောသဘောတူညီချက် (Agreement in writing) ဟု ခေါ်သည်။
ဤစာချုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပင်လုံညီလာခံမတိုင်မီစတင်၍ နောက်ဆုံးအပေးအယူလုပ်ခဲ့ကြသောသဘော တူညီချက်များသည် (Unwritten agreement) ဖြစ်သည်။
ပင်လုံစာချုပ်အရ မြန်မာပြည်မ (Ministerial Burma) နှင့် တောင်တန်းသားများသည် ၁၉၄၈-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ (၄)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကို ကြေညာခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူ ကွန်မြူနစ်သူပုန်၊ ပြည်သူ့ရဲဘော်၊ ရဲဘော်ဖြူသူပုန်များနှင့် လူမျိုးရေးသူပုန်များပေါက်ဖွားခဲ့သည်။လူမျိုးရေးသူပုန် ၌ တောင်တန်းဒေသတွင် ပါဝင်သည့် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း၊ မပါဝင်သော်လည်း တောင်တန်းဒေသတွင်ပါဝင်သော ကရင်က ပြည်နယ်မရရှိ၍ ပြည်နယ်တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟုဆိုရပေမည်။ ကရင်နှင့်အတူ ပူးတွဲပါဝင်သော မွန်နှင့် ကရင်နီ(ကယား) တို့မှာ အင်အားမတောင့်တင်းသော်လည်း ကရင်သည် ရန်ကုန်နှင့်တဆက်တည်း (၁၀) မိုင်ခန့် ဝေး သောအင်းစိန်ကို သိမ်းထားနိုင်သဖြင့် ဖဆပလအစိုးရကို ရန်ကုန်အစိုးရဟု အများကသမုတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကရင်အင်အားကို ပထမဖြိုရန် ဖဆပလက စွပ်စွဲချက်အမျိုးမျိုးဖြင့် ကရင်တို့သည်နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ် ထံမှ လက်နက်ရယူသည်၊ နက်ချဲ့ လက်ပါးစေဟု နိုင်ငံရေးအရ တိုက်ခိုက်သည့်အပြင် ကရင်-ဗမာကဓိကရုဏ်းကို ဖန်တီးသည်။ လူမျိုးရေးစိတ်ဓါတ်၊ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓါတ် ပြင်းထန်သော ပြည်သူ့ရဲဘော်တပ်ဖွဲ့များသည် ဖဆပလသို့ပြောင်းလှည့်ထားသော လက်နက်များကို ကရင်ဘက်သို့ ပြောင်းလှည့်တိုက်ခိုက်သဖြင့်ကရင်အင်အား ကျဆင်းပြီး ရန်ကုန်မှတောင်ငူသို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့ရသည်။
ကိုလိုနီခေတ် တိုင်းရင်းသားမျာအခြေအနေ (၂) - နိုင်ငွေသိမ်း
by Aung Zaw Bo on Sunday, March 3, 2013 at 4:00am ·
အင်းစိန်တိုက်ပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သော သက်ရှိထင်ရှား ပြည်သူ့ရဲဘော်ခေါင်းဆောင်က ကျနော့်ကိုပြောပြသည်မှာ (ဟိုတုန်းက နယ်ချဲ့သမားလက်ကိုင်တုတ် လူမျိုးရေးအရနှိပ်စက်သူသဘောနဲ့ တိုက်တာ၊ ဒီအကြောင်းတွေ ကျနော် စဉ်းစားမိတော့ အိပ်မပျော်ဘူး၊ ဖဆပလအစိုးရဟာ သူတို့တည်မြဲရေးအတွက် လူမျိုးရေးကို နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်ထဲ အသုံး ချသွားမှန်းသိတော့ နောက်ကျသွားပြီကိုး၊ နောက်နောင်ထပ်မမှားဖို့ဘဲရှိ တော့တယ်) ဟု ရင်ဖွင့်သွားခဲ့သည်။
၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာကို တင်ပြရလျှင် ၁၉၆၂-ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းအာဏာသိမ်းစဉ်က ၁၉၆၂ ခု၊ မတ်လ (၄)ရက်နေ့တွင် ပထစခေါင်းဆောင်များ၊ ဖဆပလခေါင်းဆောင်များ၊ ပမညတခေါင်းဆောင်တို့အား တွေ့ဆုံ၍ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေကိုဆွေးနွေးသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းက “တိုင်းပြည်တွင်ကုန်ဈေးနှုန်း အဆမတန်တက်နေသောကိစ္စနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပျက်ပြား နေသော ကိစ္စတို့ ကိုပြောကြား၍ ဖက်ဒရယ်ကိစ္စတွင် အလွန်တင်းမာလာသောကြောင့် မလွှဲမရှောင်သာ တိုင်းပြည်တာဝန် ကို ထိန်းသိမ်း ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီသည် ဆိုရှယ်လစ်ပန်းတိုင်သို့ချီတက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ချီတက်ရာတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း။”
၁၉၆၂-ခုနှစ်၊ မတ်လ (၇)ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးစောမြင့်တို့သည် ဒဂုံရိပ်သာ၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရပ် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထို သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးက “အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စဟာ သာမန်အားဖြင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး တို့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီဗမာပြည်မှာတော့အာဏာသိမ်းရခြင်းအကြောင်းက တော့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ နောက်ဆုံး ဖက်ဒရယ်မူအရေးကိစ္စတို့ကြောင့် သိမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။”
ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု၏ ၁၉၆၁-ခုနှစ် ဇူလှိုင်လ (၁၁) ရက်နေ့တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့စဉ် ဦးနုက “ရှမ်းပြည် နယ်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ရှမ်းမူနှင့်ပတ်သက်၍ ကျနော့်အနေနဲ့လေ့လာပြီးတဲ့အတွက် ဒီနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခေါ်ယူကာ ရှင်းလင်းပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ကျနော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ သူတို့လုပ်တာ မမှား ဘူး၊ ရှမ်းမူရေးဆွဲပြီး သူတို့နဲ့သဘောတူတဲ့လူနည်းစုကို ဖိတ်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချ၍ အစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ပြတာ မမှားဘူး။”
“ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ယခုအပတ်ပါလီမန်တွင် ဖြစ်နိုင်ရင်အခြေခံဥပဒေထဲမှာ လုပ်ငန်းလုပ်ရာမှာ အခက် အခဲတွေ့နေတဲ့ပုဒ်မတွေပြင်ဖို့ စိတ်ကူးပြီး ပြင်ဆင်ချက်ရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ချင်ရင် တင်ပြရန်ခွင့်ပေးချက်အရ လုပ်ကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရခွင့်ပြုချက်အရ ဒါတွေလိုချင်တယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး တောင်းလာတာ ဒီမို ကရေစီအခွင့်အရေးကို သူတို့အသုံးပြုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးသုံးတာကို အစိုးရ အဖွဲ့က စိတ်ဆိုးစရာမရှိဘူး၊ ရှမ်းမူရေးဆွဲခြင်းကို စိတ်မဆိုးဘူး၊ ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်မှာ သို့လောသို့လော အထင်မှား ဖြစ်တယ်၊ ကျနော်တို့အနေနဲ့လည်း အထင်မှားချက်တချက်နှစ်ချက်ရှိခဲ့တယ်၊ ဒီထင်မြင်မှားချက်တွေကိုစဝ်ခွန်ချို နဲ့ နှစ်ကြိမ်တွေ့ ဆုံပြီး ရှင်းလင်းပြောပြတဲ့အခါမှာ အထင်မှားချက်တွေ ပျောက်ကုန်တယ်။”
“ကျနော်ဟာ စဝ်ခွန်ချိုနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ရှမ်းမူရေးဆွဲပြီး သဘောတူတဲ့လူတွေဖိတ်ခေါ်ကာ ထောက်ခံခြင်းမှာတရား သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှမ်းမူတင်ပြပြီး ပြင်ပေးရင်ပြင်ပေး၊ မပြင်ပေးရင်ချမယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ ဘောင်က လွတ်သွားမယ်။ ရှမ်းမူအတိုင်းပြင်မပေးရင် ချမယ်ဆိုတာကို တာဝန်ရှိသူတွေကမပြောဘူး၊ တာဝန်မရှိ တဲ့သူ တွေ တယောက်နှစ်ယောက် ပြောနေတဲ့အတွက် တာဝန်မဲ့ဒီမိုကရေစီ အပြင်ဘက်ရောက်နေတာမျိုး မဖြစ် အောင် ထိန်းပါလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာ စဝ်ခွန်ချိုက ရှမ်းမူကိုပြင်မပေးရင် ချမယ်လို့ ပြောတဲ့ လူရှိရင် တရား ဥပဒေအရ အရေးယူပါ လို့ပြောတယ်။”
“အခုသူတို့လုပ်နေတဲ့လမ်းစဉ်ဟာ ပေးရင်ပေး မပေးရင်ချမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းစဉ်မဟုတ်၊ ကျနော်တို့ကလည်း မင်းတို့ချရင် ဒို့ကလဲချမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းစဉ်မဟုတ်၊ မိသားစုတွေ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စနစ်နဲ့ လုပ်နေတဲ့လမ်းစဉ်သာ ဖြစ်ပါ တယ်။”
“စဝ်ခွန်ချိုကိုအကြံပေးခဲ့သလို ရခိုင်၊ မွန်၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ချင်းစသောလူနည်းစုသာမက မြန်မာတွေကိုပါ ဒီအကြံပေးချင်တယ်။ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲအောင် လူတိုင်းလိုချင်မှာဘဲ၊ အားလုံးလိုချင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရအောင် လူနည်းစုနဲ့မြန်မာဟာ ပြည်ထောင်စုတခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ လုပ်တဲ့နေရာမှာ ထိမ်းသိမ်းထားရ မယ့်မူကြီးတခုရှိပါတယ်။”
“ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယားစသောလူနည်းစုတွေကလည်း ပြည်ထောင်စုကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင် ကိုယ်ကြိုက် တာချည်း မလုပ်ပါနဲ့၊ မြန်မာတွေ ဘာကြိုက်တာလဲ ကြည့်ပါ၊ မြန်မာတွေကရော လူနည်းစုတွေကရော ပြည်ထောင်စု ကြီးအတွက်လုပ်ရာမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြိုက်တာကိုကြည့်ပြီး လုပ်သွားရင် ပြည်ထောင်စုကြီး တည်မြဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာတွေကလည်း ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်၊ လူနည်းစုတွေကလည်းကိုယ်ကြိုက် တာ ကိုယ်လုပ်ရင် ကွဲမယ်။ ပြည် ထောင်စုကြီး တည်မြဲခိုင်ခံ့စေချင်ရင် ငါတကော ကော၍မရဘဲ တိုင်တိုင်ပင် ပင်နဲ့ လုပ်သွားပြီး အဖြေရှာရပါမယ်၊ ပြည် ထောင်စုကြီး တည်တံ့ခိုင်မြဲချင်ရင် မလိမ့်တပတ်မလုပ်နဲ့၊ မိသားစု အနေနဲ့ ဖြေရှင်းသွားကြရန် လူနည်းစုတွေရော၊ မြန်မာတွေကိုပါ ဒီနေရာက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ရှမ်းမူခေါ်တဲ့ ဖက်ဒရယ်မူကိုမျက်လုံးမပြူးကြနဲ့၊ မိသားစုအနေနဲ့ ဖြေရှင်းသွားပါ့မယ်။”
“ဒီမိုကရေစီနဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဟာ တဆက်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျမကလည်း တိုင်းရင်း သားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုမသုံးချင်လို့ ပြည်ထောင်စုတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သုံးတာပါ၊ ပြည်ထောင်စုတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် ကျမတို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကလည်း အားလုံးလိုလား ကြပါ တယ်၊ ကျမတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့်တကွ အခြားဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကလည်း လိုလား တယ် ဆိုတာ အားလုံးယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်—-ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့အရေးကြီးတာက တော့ ကျမတို့ဟာ ဘယ်လိုပြည်ထောင်စုပုံသဏ္ဍာန်ဖော်ထုတ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဘဲ၊ ခုနကသဘာပတိကြီးတင်ပြ သွားတဲ့အခါမှာလည်း ပါပါ တယ်။ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကာလတုန်းက လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့ တကြိမ် တည်း ဘဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်၊ ညှိနှိုင်းခဲ့တယ်၊ တိုင်ပင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုပုံသသဏ္ဍာန်နဲ့ ပြည်ထောင်စုကို ဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကာလကတည်းက စတင်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ တင်ပြသွားပါ တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်မူဝါဒသဘော ထားနဲ့လည်း မကွဲပြားပါဘူး။ ကျမတို့မူသဘောထား ကြေညာချက် (၉) ချက်ထဲမှာ ဆိုလို့ရှိရင် အခြေခံစည်းမျဉ်း တခုကို ပင်လုံညီလာခံတခုခေါ်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှာလည်း အခြေခံစည်းမျဉ်းတခုကို ပင်လုံညီ လာခံတခုကနေပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ ရေးထား ပါ တယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျမတို့ဟာ လုပ်ငန်းအရစပြီးလုပ်ဖို့လိုမယ် ထင်ပါတယ်။အခုဒီမှာရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှလူကြီး များ၊ တရားဥပဒေပညာရှင်များနဲ့ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ ဘယ်လိုအခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေတခုကိုဆွဲသင့်တယ်ဆို တာ စပြီးတိုင်ပင်ဖို့ရောက်ပြီလို့ ကျမထင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကိုပြောနေမဲ့အစား စပြီးတော့လုပ်ကြပါလို့ကျမအကြံပြု ချင်ပါတယ်။”
“အဲ့ဒီတော့ Federal ဆိုတဲ့ကိစ္စ၊ Federal ဆိုတာ စောစောက သဘာပတိကြီးပြောသွားတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ၊ Federal ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတခုဘဲ၊ Federal ဆိုတာ ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့အားလုံး သိပြီးသားပါ။ ခွဲရေး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျမလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Federal ဆိုတာ ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ဆိုတော့ Central Government နဲ့ State Government တို့အကြားမှာ ဘယ်လိုအာဏာ ခွဲဝေမလဲ၊ ဒါက Federal ရဲ့ အဓိကပြဿနာဘဲ၊ ဒါဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ နောက်ပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ဘယ်လောက်အာဏာယူပြီး ဘယ်လိုအာဏာ တွေအသုံးပြုထားမလဲ ဒီဟာကိုခွဲရမယ်။ နောက်ဆုံး Federal ရဲ့ ပြဿနာဟာ ဒါပါဘဲ။”
‘အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်များအဖွဲ့ (ဒမဖ) သဘောထား’
အတွင်းရေးမှူး- ဦးညိုဝင်း တို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ် (ဒမဖ)မှ ၁၉၈၉-ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင် “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရာတွင် ထားရှိသင့်သောမူဝါဒသဘော ထားများကို တင်ပြခြင်း” စာတမ်းတွင် ပါဝင်သော အရေးကြီးသောအချက်များကို ကောက်နုတ်တင်ပြရ လျှင်… … …
“တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် လူမျိုးစုများ၏ ထာဝရညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်ပြီး၊ ထိုညီညွတ်ရေး အဓွန့်ရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၊ လူမျိုးစုများတွင် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် (Right of self-determination) အပြည့်အဝခံစားပိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။ တန်းတူညီမျှမှုလည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
“ဤကဲ့သို့သော လူမျိုးရေးရာအပိုင်းအနေအထားအရ မြန်မာနိုင်ငံသည် လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ရာ တိုင်းပြည် (Multi-National State) ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားလေသည်။ ထို့ကြောင့် တပြည်ထောင်စနစ်လော ဟူသော အလွန် အရေးကြီးသောအခြေခံပြဿနာကြီးကို ရှင်းလင်းဖြေဆိုရာ၌ ပြတ်ပြတ်သားသားပြည်ထောင်စုစနစ်ကို ဖွဲ့စည်းသင့်ပေ သည်။
အထက်ပါကြွေးကြော်သံများ ထုတ်ပြန်ထားသည့်သဘောထားမှာ ယခုလက်ရှိပြည်ထောင်စုအနေအထား အတိုင်း နေရန်သာဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးလိုသော တိုင်းရင်းသားများ၏ဥပဒေတွင်း ဥပဒေလုပ် ငန်းများကို ဖမ်းဆီးနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ပေးခြင်း၊ လက်နက်ဖြင့်အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းနေသည့် အဓိပ္ပါယ် “ပေးတာယူ၊ ကျွေးတာစား၊ စကားမများနဲ့၊ မကျေနပ်၍ဆင်ခြေတက်လျှင် ဒုက္ခတွေ့သွားမည်” သဘော ဖြစ်သည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်အမှန်ကိုတင်ပြရလျှင် ၂၀၀၄-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၂)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ရှမ်းပြည်ပညာရှင်များအတိုင်ပင်ခံကောင်စီတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) မပါဝင်ခဲ့ပါ။ ၂၀၀၅-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၇)ရက်နေ့ တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပသော (၅၈)နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည် အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားတွင်လည်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦး၊ အတွင်းရေးမှူး စိုင်းညွန့်လွင်တို့ တက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ နောက်တနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၈)ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည် တပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) နာယက ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင်၊ ရှမ်းမျိုးဆက်သစ်မှ (၄)ဦး၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦး၊ အတွင်းရေးမှူးစိုင်းညွန့်လွင်နှင့် အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦး စုစုပေါင်း (၉)ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်။ နအဖ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ရှင်းပြသည် မှာ “၄င်းတို့သည် မြန်မာပြည်နယ်အပါအဝင် ရှစ်ပြည် နယ်ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းအား ဖြင့် ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်ဆိုသည့်စကားကို အရေခြုံဗန်းပြပြီး” မည်ကာမတ္တ ပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်ကာ တချိန်ချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုမှခွဲထွက်လျက် သီးခြားနိုင်ငံ ထူထောင် ရန်သာဖြစ်သည်ဟု လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ပျက်ပြားအောင် ဆူဆူပူပူဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော် ရာရောက်သည့်အပြင် အင်မတန် ကြီးမားသည့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုပျက်ပြားရေး၊ ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲရေး တို့ကို ဦးတည် စေသည့်လုပ်ရပ်များ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း အရေးယူလိုက်ရပါသည်ဟုဆိုပါသည်။ SSA-N နာယက ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင်ကို ထောင်ဒဏ် (၁၀၆)နှစ်၊ ခွန်ထွန်းဦးကို (၉၃)နှစ်၊ စိုင်းညွန့်လွင်ကို (၈၅)နှစ်၊ စိုင်းလှအောင်၊ ဦးမြင့်သန်း၊ ဦးထွန်းညို၊ စိုင်းညီမိုး၊ စိုင်းမျိုးဝင်းထွန်းတို့ကို (၇၉)နှစ်စီချမှတ်ပြီး ဝေးလံသော နယ်စွန်နယ်ဖျား ထောင်များသို့ ဈေးဦးပေါက်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဖော်ကောင် စဝ်သာဦးကို (၁၂)နှစ် ချမှတ်ပြီး ချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေး လိုက်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ ဗမာ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားများအနက် တပ်မတော်အစိုးရကရှမ်းခေါင်း ဆောင်များကိုချမှတ်သော ထောင်ဒဏ်သည် ယနေ့ထိတိုင် စံချိန် မကျိုးသေးဘဲရှင်သန်လျက်ရှိ နေပါသည်။
လူမျိုးစုများကို ကာကွယ်ပေးထားသည့်အသေးစိတ် ဥပဒေပြဋ္ဌာ...
နေပြည်တော်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရု မစိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ ပြန...
လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဆရာတော်ကို ထောင်ဝင်စ...
ဦးဆန်းဆင့် အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် မျာ...
စစ်တွေ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် ချာရီယာ ဥပဒေဖြင်...
ရှင်သဇ္ဇဏ၏ မီးလောင်ဒဏ်ရာများမှာ Phosphorous (ဖေ့ါစဖ...
မန္တလေး FM က ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၊ အာမန်မြို့တော်အနီး CM...
လက်ပန်းတောင်တောင်ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သြစေ...
ပုံနှိပ်ဥပဒေမူကြမ်းအားလုံးဝ လက်မခံကြောင်း တစ်ညီတစ်...
ပင်လုံစာချုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြုလုပ်တဲ့ အမြင်သဘောထာ...
စိုင်းနော်ခမ်း ဖမ်းမိတဲ့ နောက်ပိုင်း မူးယစ်ဆေး ဈေ...